Uyini umehluko phakathi kwe-Amoxiclav ne-Sumamed? I-Sumamed noma i-amooticlav okungcono ezinganeni ezine-angina > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Sumamed noma i-Amoxiclav: ukuqhathanisa futhi yikuphi okungcono
Imvamisa, ezifweni ezinhlobonhlobo zamagciwane, kunqunywa imishanguzo eqenjini elithile. Izidakamizwa ezisebenzayo nezisetshenziswa kabanzi futhi.
Le mithi elwa namagciwane itholakala ngezindlela ezahlukahlukene futhi inomphumela omuhle ngokumelene namagciwane we-gram-negative ne-gram-positive pathogenic bacteria. Iziguli eziningi zikhathazekile ngombuzo: iyiphi i-ejenti elwa namagciwane asuka kudatha ephephile futhi esebenza ngempumelelo?
I-Azithrimycin - isakhi esiyisisekelo seSumamed
- Lesi sidakamizwa esiyingxenye yeqembu le-macrolide elwa namagciwane. Kuyi-azalide enesenzo esime isikhathi eside. Ivimbela ukukhula nokukhiqizwa kwamagciwane we-pathogenic akhula ekugxiliseni kokuvuvukala.
Ama-microorganisms wegram-positive ne-gram-negative azwela i-Sumamed. Isebenza kahle ku, mycoplasmas, ureaplasmas.
Umuthi olwa namagciwane utholakala ngezindlela ezilandelayo zokwelapha:
Amacwecwe ama-milligram angama-125, 250 nama-500. Amathebulethi lawo axutshwe nentambo yokufafaza eluhlaza okwesibhakabhaka. Kuzo zombili izinhlangothi kukhona i-convex, ibe nomdwebo.
I-Powder yokulungiselela isiraphu kuma-milligram angama-100 kumamililitha amahlanu. Kungaba ne-tint ekhanyayo ephuzi noma emhlophe, enephunga le-sitrobheli. Ngemuva kokuthi i-powder inyibilike, uketshezi olungenangqondo onamafomu okukhanya, aphuzi kancane.
Amandla we ukumiswa kwe-forte ama-milligram angama-200 kumamililitha amahlanu. Kubonakala ngezakhiwo ezifanayo ne-100 mg mg ephezulu. Sengathi unephunga elihlukile.
Amaphilisi we-milligram angama-250. Ama-gelatinous, ane-cap cap eluhlaza okwesibhakabhaka nomzimba oluhlaza okwesibhakabhaka. Amaphilisi aqukethe into enobuthi ophuzi okhanyayo noma umbala omhlophe.
Amathebulethi aqukethe into azithromycin esebenzayo. Izithako ezisizayo eziyingxenye yokwakhiwa zifaka:
ICalcium hydrogen phosphate
I-Sodium Lauryl Sulfate
Imininingwane eminingi mayelana nezidakamizwa ze-antibacterial ingatholakala kuvidiyo:
Ukwakheka kwefulawa yesiraphu - 200 mg yesithako esisebenzayo - azithromycin. Kukhona izinto ezinje ezisizayo kuyo:
I-Trisodium Phosphate Anhydrous
I-Colloidal silicon dioxide
Banana, Cherry noVillailla Flavors
Izinto ezingeziwe kwifomu le-capsule yilezi:
Ngakho-ke, ukwakheka kuya ngesimo somuthi. Izithako ezisebenzayo ziyefana, kuphela kumithamo ethile. Ngokuphathelene nokutholwayo kwifomu ngalinye leSumamed, bahlukile.
Lapho kunikezwa umuthi olwa namagciwane, ama-contraindication
ISumamed ibekelwe izimo ezilandelayo ze-pathological zohlelo lokuphefumula kanye nezifo ze-otolaryngological:
Isetshenziselwa kabanzi ekwelapheni izifo ezithathelwanayo nezithathelwanayo zezicubu ezithambile nezingqimba zesikhumba, okubandakanya:
Ngaphezu kwalokho, umuthi usetshenziselwa izifo zohlelo lwe-genitourinary, okungukuthi ekwelapheni i-cervicitis, i-urethritis yemvelaphi ehlukahlukene, ama-erythema migrans. Inqunyelwe isifo seLyme.
Baphatha i-pathologies edluliselwa ngocansi nge-antibiotic, ama-activation adala yi-chlamydia.
Kodwa-ke, kukhona eminye imikhawulo maqondana nokusetshenziswa kweSumamed. Umuthi olwa namagciwane uvikelekile uma kwenzeka kutholakala ku-hypersensitivity kwezidakamizwa.
Ngokuqapha, kufanele usebenzise umuthi ukwehluleka kwesibindi ne-pathologies yezinso. Futhi, ngaphansi kokuqashwa ngudokotela, basebenzisa lo muthi ngokuthambekela kokuphendula okwenziwa yigwala.
I-Amoxiclav: ukwakheka, izakhiwo, ifomu lomthamo
I-Amoxiclav - isidakamizwa esiseqenjini lama-penicillin anemiphumela ehlukahlukene. Lesi sidakamizwa i-beta-lactamase inhibitor yamagciwane we-pathogenic.
Ngokuphumelelayo ngokumelene ne-streptococci, i-staphylococci, i-enterococci kanye ne-anaerobic infactants kanye ne-aerobic ezincane.
Le antibiotic ikhiqizwa ngezindlela eziningi:
Amacwecwe angama-250 kanye nama-500 milligram. Bahlanganiswe ngesimo sefilimu.
Amathebulethi ahlakazekile abizwa nge-Amoxiclav Quicktab. Zikhiqizwa ngemithamo engama-875 noma ama-500 milligrams we-amooticillin nge-milligramama-125 e-clavulanic acid.
I-Powder yokumiswa, okuhloselwe ukusetshenziswa kwangaphakathi.
Ukwakheka komuthi kuncike kwifomu lomthamo we-antibiotic. Izakhi ezisebenzayo zomuthi yilezi:
Okutholwa ngamathebhulethi kufaka i-croscarmellose sodium ne-cellulose kuma-microcrystals.
I-Amoxiclav powder, lapho ukumiswa kokuphathwa komlomo kwenziwa khona, kuqukethe i-sodium benzoate, i-mannitol, i-sodium citrate, i-microcrystalline cellulose.
Ukwakheka kwamacwecwe ahlakazekile kufaka phakathi izinto ezingasebenzi: i-aspartame, i-talc, i-castor oil, i-iron iron oxide, i-cellulose eyisilayidi kuma-microcrystals, i-anhydrous colloidal silicon dioxide, flavourings.
I-Amoxiclav isetshenziswa kabanzi ku-otolaryngological, therapeutic, gynecological, orthopedic practice nasehlinzwa maxillofacial.
Izinkomba zokusetshenziswa yilezi zifo ezilandelayo:
Ngokuvamile esetshenziswa ekwelapheni ukutheleleka kwamagciwane kohlelo lwe-genitourinary, kanye naku-pathologies yezicubu ezithambile nesikhumba semvelaphi yamagciwane. I-Amoxiclav isetshenziselwa ukuvimba izinqubo zokuhlanza kanye ne-sepsis ngemuva kokungenelela kokuhlinzwa enhliziyweni, izinso, izitho zesisu kanye ne-pelvis encane.
Ukuxhumana kokusetshenziswa kwezindlela ezahlukahlukene zesidakamizwa kufaka:
IHepatitis yemvelaphi yamagciwane.
Ukungezelela ukuzwela komzimba kuzakhi ze-antibiotic.
I-trimester yokuqala yokukhulelwa.
Ngokuqapha nangaphansi kokuqashwa ngudokotela, umuthi ubekwa lapho uthwala ingane futhi uncelisa ibele. Imvamisa isetshenziswa uma inzuzo emzimbeni wowesifazane idlula ingozi yemiphumela emibi enganeni.
I-Sumamed noma i-Amoxiclav: yini umehluko futhi yikuphi okungcono?
Ngaphambi kokuthola ukuthi yisiphi isidakamizwa esivela kulawa ma-antibhayoriki esithathwa njengesihamba phambili, kubalulekile ukukhumbula ukuthi lezi zimali zikhethwa nguchwepheshe oqeqeshiwe, kucatshangelwa izici zomzimba womuntu ogulayo. Ngakho-ke, esimweni ngasinye, noma iyiphi yalezi zidakamizwa ezimbili ingasebenza kakhulu.
Kwesinye isikhathi, ukuvikela umlutha, udokotela angahle azishintshe izindlela. Uma kwenzeka kunesifo, kunikezwa umuthi owodwa, kamuva kusetshenziselwa i-antibiotic elandelayo kwezifo.
Umehluko kule mishanguzo kubhekwa ukuthi uhlobene namaqembu ahlukene. Ingabe i-macrolide antibiotic, i-Amoxiclav ingeyochungechunge lwe-penicillin. Ngokuya kwalokhu, izakhi ezisebenzayo zale mithi ziyizinto ezahlukahlukene. Yomibili le mikhiqizo iyatholakala ngesimo sethebulethi, ngesimo samakhompiyutha nokumiswa. I-Amoxiclav iyatholakala ngesimo samathebulethi ahlakazeka ancibilika ngokushesha.
Inzuzo yeSumamed isikhathi sokusetshenziswa kwayo - izinsuku ezintathu kuphela.
Ngakho-ke, umphumela wokwelapha uvela ngokushesha lapho uthatha le antibiotic. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa singaphansi kwe-Amoxiclav ngohlu lwe-contraindication. ISumamed inemikhawulo eminingi yokusebenzisa kune-Amoxiclav. Ngaphezu kwalokho, uhlu lwezinkomba zokusetshenziswa kwamuva lubandakanya izifo ezingalashwa yiSumamed. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukuthola ukuthi yisiphi isidakamizwa esingcono. Njengoba ama-antibiotic athile enezinzuzo ezithile nezingathandeki.
I-Sumamed noma i-Amoxiclav zingama-antibacterial agents abanzi asebangeni elisebenzayo ngokumelene namagciwane angama-gram-positive ne-gram-negative. Babekelwa amandla noma ngemuva kokufunda ukuzwela kwe-pathogen kulawa ma-antibiotic.
Kungokwalungiselelwa kokulungiswa kwe-beta-lactam ye-inhibitory. Ine-penicillin antibiotic amooticillin ne-clavulanic acid, inhibitor ye-enzymes enzyme beta-lactamases.
I-Amoxiclav ikhombisa umphumela we-bactericidal, ivimbela ukuhlanganiswa kwezakhi zodonga lweseli lwe-microorganism. IPeptidoglycan iyayekwa ukudala, okuholela ekufeni kwamagciwane. I-Clavulanic acid ivikela i-amooticillin ekubhujisweni yi-beta-lactamase enzymes, inwebisa isibuko sokusebenza kwe-antibiotic.
I-Amoxiclav ithinta omabili ama-gram-positive ne-gram-negative microorganisms. Ibulala i-streptococci (kufaka phakathi eluhlaza okotshani), i-staphylococci (kufaka negolide), i-corynebacteria - i-diphtheria bacillus, i-spore-forming hay bacillus, i-anthrax causative agent. Isebenza ngokulwa ne-enterococci, i-enterobacter, i-listeria, i-nocardia, i-Escoichia coli ye-pathogenic, ikilasi likaPfeiffer. Isebenza kuma-pathogens amakhulu wezifo zamathumbu - i-bacillus yesisu, i-salmonella, i-yersinia, i-cholera vibrio.
Inomphumela we-bactericidal maqondana ne-meningococcus, i-gonococcus, i-pertussis, i-anaerobic microorganisms - peptococci, bacteriao fusobacteria. Isebenza ngokumelene nama-spirochetes - i-borrelia, i-ejenti ebangelwa yi-syphilis, leptospira. Isebenza ngokumelene ne-chlamydia.
I-Amoxiclav isetshenziselwa ukwelapha i-peptic ulcer, izifo ze-ENT, i-enterococcal cystitis, izifo ezithinta i-odontogenic, i-bronchitis, i-pneumonia ebangelwa yi-hemophilic bacillus, cholecystitis, i-peritonitis, isifo se-Lyme, i-osteomyelitis.
I-bioavailability yomlomo - i-70%, ephezulu uma usebenzisa umuthi ekuqaleni kokudla. Imunca ngokugcwele amathumbu. Ukuhlushwa okuphezulu kutholwa ihora elilodwa ngemuva kokuphatha. Ukuxhumana namaprotheni e-plasma kungu-18-25%.
Zombili izinto ezisebenzayo zisatshalaliswa kahle kwizicubu ezinzima nezithambile. Ngena ngesithintelo segazi-lobuchopho emalanjeni athambile (nge-meningitis), ku-placenta nobisi lwebele.
I-antibiotic ene-inhibitor ikhishwa ikakhulukazi yizinso ngama-60% angaguquki. I-10% ye-amooticillin ishiya umzimba ngendlela ye-metabolite - penicilloic acid. I-Clavulanic acid ikhishwa zombili ezingashintshiwe futhi ngesimo se-metabolite engasebenzi ngokusebenzisa izinso namathumbu.
Contraindication: yokwaliwa yi-penicillin ne-beta-lactamase antibiotics, isibindi esinzima, izinso, i-lymphocytic leukemia, i-mononucleosis ethelelekayo.
Imiphumela emibi: isicanucanu, ukugabha, i-bile reflux, isisu, ukuthamba, ulwimi olumnyama, ukwehluleka kwesibindi, i-cholestasis, ukuqhuma kwe-allergic, ukushaqeka kwe-anaphylactic, i-edema kaQuincke, i-pseudomembranous colitis, ukwehla kwenani leukocytes, amaplatifomu, i-nephritis ephakathi nendawo.
Isidakamizwa se-antibacterial antibacterial sekilasi le-macrolide (azithromycin). Inqanda ukwakheka kwamaprotheni kuma-ribosomes of bacteria, kuvimbela ukuzalwa nokukhula kwama-microorganisms we-pathogenic. Kumakhambi amakhulu, ayabulala.
Kuthinta ama-microorganisms wegram- positive - i-streptococci, i-staphylococci, ama-bacteroids, i-clostridium perfringens, i-enterococci. Isebenzayo ngokumelene namagciwane angen gamu - i-fusobacteria, i-ejenti ebangelwa yi-gonorrhea, i-meningitis, i-borreliosis, ngokumelene ne-hemophilic bacillus ne-legionella. Ingena esitokisini, isebenze ku-chlamydia, mycoplasmas, ureaplasmas.
Kubekelwe izinqubo ezithathelwanayo nezokuvuvukala zangasese (i-prostatitis, urethritis, i-endometritis, i-vaginitis), i-Reiter's syndrome, i-mycoplasma pneumonia.
Yize izidakamizwa zingabamele amaqembu e-pharmacological ahlukene, zinemiphumela emibi kakhulu efanayo kanye nokuphikiswa. Lokhu kufaka phakathi i-phenylketonuria, ukwehluleka kwesibindi. Zombili lezi zidakamizwa zithinta igazi kanye namasistimu wokugaya ukudla, ngakho-ke endabeni ye-pathology yalezi zinhlelo, ukukhetha okulungile nakho kuyizehluleki.
Inzuzo ye-Sumamed ngaphezulu kwe-Amoxiclav ukusetshenziswa kwayo ezinganeni ezingaphezulu kweminyaka engu-3, ​​okwenza kuthandeke kakhulu ekuzijwayezeni ezinganeni. Ngokuphathelene nokukhulelwa nokuqunjelwa, izidakamizwa zinezinkomba ezifanayo.
Umehluko omkhulu phakathi kweSumamed ne-Amoxiclav kusilinganiso sazo.
I-Sumamed isidakamizwa esisemqoka ekwelapheni ukutheleleka nge-chlamydial. Lokhu kungaba yisifo sezingxenye ezingezansi zohlelo lwezitho zangasese, izitho zomzimba we-pelvic, kanye ne-chlamydia yendawo engachazwanga. Umuthi uyindlela yokukhetha i-chlamydia ekhulelwe. Imvamisa isetshenziswa ekwelapheni isifo seLyme.
I-Amoxiclav isetshenziswa kabanzi emikhubeni yesibeletho ekwelapheni izifo zokuvuvukala ze-etiologies ezahlukahlukene. Iphinde isetshenziselwe ukwelapha ukutheleleka kwezicubu ezithambile.
Izinkomba ezejwayelekile zalawa ma-antibhayirasi izifo eziphezulu zokuphefumula zezifo.
Amagciwane adala izifo zepheshana lokuphefumula kancane kancane aya ngokuya eba namandla emithini yemithi elwa namagciwane. Ngasikhathi sinye, isayensi nayo ayimi futhi ihlala ikhulisa izidakamizwa ezintsha, kanye nokwenza ngcono ezindala. I-Amoxiclav ingabhekiswa kusidakamizwa esinjalo. Le yinguqulo eyenziwe ngcono ye-amooticillin, ehlukaniswa ukutholakala kwayo kanye nokusebenza kwayo.
I-Amoxiclav yi-ejenti elwa namagciwane futhi elwa namagciwane, into eyinhloko yi-amoxicillin. Umuthi ungoweqembu lama-penicillin. Ngaphezu kwesithako esiyisisekelo esisebenzayo, i-clavulanic acid ifakiwe ekwakhiweni komuthi. Inhloso esemqoka yalokhu kwento ukuvimbela ukwephulwa kokuqala kwe-amooticillin ..jpg "alt =" amooticlav "w>
Njengoba sekushiwo ngenhla, yonke imishanguzo ebhekwayo ibonisiwe, okokuqala, ekwelashweni kwezifo zepheshana lokuphefumula eliphezulu. Ngeke sigxile kulokhu. Cabanga ezimweni lapho umuthi ungeke usetshenziswe. I-Amoxiclav inokuphikisana okulandelayo:
ukuvela komzimba kwizakhi zomuthi,
i-mononucleosis nokusola ngakho,
Lapha kufanele ukusho inzuzo yesidakamizwa. I-Amoxiclav ingabekwa ebuntwaneni, kanye nangesikhathi sokukhulelwa. Lapho intombazane isesikhundleni noma ukuncelisa ibele, phuza umuthi ngokucophelela. Kumele kuqondwe ukuthi izakhi zento ekugxilweni okuncane zithunyelwa obisini.
Noma yimuphi umuthi olwa namagciwane unemiphumela emibi eminingana, futhi i-amooticlav nayo iyimbi. Lokhu akufanele kwesabe, ngoba akuvelanga njalo. Ngaphezu kwalokho, umuthi uphawuleka ngokusebenza kwawo. Eminye yemiphumela engemihle yile elandelayo:
ukwehla kwesistimu yokugaya
ukubonakaliswa komzimba (ukulunywa, ukuqubuka, ukucasuka, njll.),
ukuthuthukiswa kwezifo zohlelo lokujikeleza,
Ngokuyisisekelo, imiphumela enjalo ingenzeka uma uphuza umuthi naphezu kokuphikisana. Umthamo kumele ubhekwe ngqo njengoba kuchazwe yimiyalo noma uchwepheshe. Ekubonakalisweni kokuqala okungathandeki, kufanele uthintane nodokotela. Uzolungisa ukwelashwa bese esebenzisa umuthi esikhundleni sawo.
I-Azithromycin isetshenziswa njengengxenye eyisisekelo yalo muthi. I-Sumamed ingeyesizukulwane sakamuva semithi. Ubuntu bayo bungokuguquguquka kwako, bungacindezela isenzo sezinhlobo eziningi zamagciwane. Izenzo ezihlanganisiwe kuzinga le-intracellular.
I-antibiotic ingeyeqembu lama-macrolides futhi ingachazwa lapho isiguli singaboni ama-penicillin. Kuyaphawuleka ukuthi okufakwe kumaminithini kubhekwa njengomuthi ophephile. Ingasetshenziswa isikhathi eside. Yize isidingo esinjalo sidingeka njalo. Imvamisa inkambo yama-macrolides ayidluli izinsuku ezi-3 ..jpg "alt =" isithombe esilinganiselwe "w>
Yize okubizwa ngama-sumerals kubhekisele kumuthi wesizukulwane sakamuva, awukwazi ukusetshenziswa yiwo wonke umuntu. Kuyaqapheleka ukuthi uhlu lwezinto ezinqatshelwe luncane impela. Kulokhu, umuthi ungcono impela kuneqembu le-penicillin. Ngakho-ke, okubizelwe kufakwe ku-contraindised ku:
Umuthi awuvamile ukudala imiphumela emibi. Kungakho livame ukunqunyelwa iziguli. Imvamisa, ukululama kuza ngokushesha ngokwanele, futhi umphumela ongathandeki umane awunaso isikhathi sokuzibonakalisa. Ezimweni ezingavamile, lokhu okulandelayo kungenzeka:
Ukuqhathaniswa kwamalungiselelo weSumamed ne-Amoxiclav
I-Amoxiclav isidakamizwa esilwa namagciwane esibonisa umphumela we-bactericidal, ngoba i-azithromycin isebenza ngegciwane. Ama-penicillin awasebenzi ngokumelene ne-mycobacteria, izifo ze-intracellular (mycoplasmas). I-Azithromycin isebenza ngokulwa nabo. I-Amoxiclav ingaholela ekwakhekeni kwamagciwane we-L-bacteria angenaludonga nokutheleleka okungapheli.
Kufanele kusheshe kushiwo ukuthi i-augmentin iyi-analogue ye-amooticlav. Ingxenye yalo eyisisekelo yi-amoxicillin. Ngomsebenzi wayo othela izithelo, i-clavulanic acid ifakiwe ekwakhiweni kwalo muthi. Ngenxa yalokhu, umphumela wokwelapha uphinyiselwa ngokwengeziwe.
Uyini umehluko phakathi kwe-amooticlav? Yikuphi kwalemithi engcono? Eqinisweni, i-augmentin yehluka kuphela ngegama nomenzi wayo. Kungakho ukuqhathanisa izidakamizwa kungenangqondo. Umphumela wazo uyefana.
Njengoba i-agumentin iyikhophi le-amoxiclav, khona-ke ukuphikiswa kuzolingana. Uhlu olubanzi lwemiphumela emibi nalo alushintshile. Lokhu kufanele kukhunjulwe lapho uthenga i-augmentin. Yebo, akukanconywa ukuthi unikeze umuthi uwedwa, njengoba ingozi yokwanda kwe- "side effect" ikhuphuka ..png "alt =" isithombe se-Augmentin "w>
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ezigweni zepheshana lokuphefumula eliphezulu, umuthi ukhethwa ngokuhlukile. Ama-penicillins (augmentin, amoxiclav) angcono kothile, ama-macrolides (afakwa amanani) kothile. Kunezimo lapho uchwepheshe eguqula izidakamizwa. Ngemuva kwenkambo eyodwa, enye ibekelwa ukufeza ukusebenza kahle okukhulu, ngoba amabhaktheriya ajwayele ukusebenzisa izakhi ezisebenzayo zomuthi.
U-Augmentin unenzuzo eyodwa ebonakalayo ngaphezulu kwethotho. Umuthi ungabekelwa izingane ezisanda kuzalwa, kuthi uma zibizwa ngama-summit ziqale ukunikezwa izingane ezisuka ezinyangeni eziyisithupha kuphela. I-Augmentin ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha nayo ingabekwa ngesikhathi sokukhulelwa nokukhulelwa. Kulokhu, umuthi ungcono impela kunophikisana naye.
Phakathi kwezindlela zokuhlola, kubalulekile ukuhlala isikhathi sokuvunyelwa. Lokhu kuyinkomba ebaluleke kakhulu, ikakhulukazi lapho beqala ukwelapha izingane. Lapha i-augmentin noma i-amoxiclav ngokusobala iphansi.Zidinga ukuthathwa kungakapheli isonto, kanti isikhathi sokuthatha okubizwayo sincishisiwe saba yizinsuku ezi-3. Ngakho-ke, umuthi usebenza ngokushesha, futhi ukululama kwenzeka ekuqaleni.
Uma uqhathanisa i-amooticlav ne-augmentin, ungagxila kuphela kuzindleko zalezi zidakamizwa ezifanayo. Njengoba umuthi wokuqala uvele kungekudala, intengo yawo izoba ngaphezulu. Hhayi, akekho umuntu ofuna ukweqa umphumela ofanayo. Lokhu mhlawumbe ngumehluko omkhulu phakathi kwalezi zihlobo.
Umuntu ngeke athi ngokuqinisekile ukuthi iliphi ikhambi elingcono. Yonke le mishanguzo emithathu inezinzuzo nobubi. Into esemqoka ukuthi ngamunye wabo angasiza esimweni esithile. Yebo, ukukhetha kufanele kushiyelwe uchwepheshe ozokhetha i-antibiotic ngawodwana.
amazwana anikezwe amandla yi-HyperComments
Idatha-ye-lazy-Type = "image" data-src = "http://lechenienasmorka.ru/wp-content/uploads/2015/10/Sumamed.jpg"> Incazelo yezidakamizwa i-Amoxiclav ne-Sumamed ye-sinusitis data-lazy-Type = "image" data-src = "http://lechenienasmorka.ru/wp-content/uploads/2015/11/53.jpg">
"Azithromycin" noma "Sumamed": yini okungcono, umehluko phakathi kwabo idatha-lazy-Type = "image" data-src = "http://lechenienasmorka.ru/wp-content/uploads/2015/11/1444665605288. jpg ">
Ukusetshenziswa kwemithi elwa namagciwane i- "Doxycycline" ne "Linkomycin" ene-sinusitis
“ISumamed ne-Amoxiclav, ngokwazi kwami, asetshenziswa kabanzi ekwelapheni ukutheleleka kwamagciwane ezithweni nasezinhlotsheni ezahlukahlukene. Bazibonakalise kahle isikhathi eside. Kepha okungithokozisayo kakhulu ukuthi yini ebekiwe okokuqala kwethoni - i-Sumamed noma i-Amoxiclav? Uyini umehluko phakathi kwale mishanguzo ye-antibacterial? Kungani, ngakwimisipha ethile, odokotela bathanda i-Amoxiclav, kanti abanye bayithanda iSumamed? ”
Yisiphi isidakamizwa esisebenza kangcono
I-Azithromycin iyi-antibiotic entsha, ngakho-ke, isibuko somsebenzi wokulwa namagciwane sibanzi kakhulu kunaleso se-penicillin esivikelwe yi-inhibitor, futhi sifaka i-mycoplasmas, chlamydia.
Ukuze uhlu imishanguzo esebenza ngempumelelo futhi ephumelelayo I-Amoxiclav ingena ezidakamizweni, ene-bronchitis nezinye izifo zesimo segciwane, ilwa nesigaba esibanzi samagciwane we-pathogenic.
I-Amoxiclav isidakamizwa esiyinhlanganisela, i-antibiotic equkethe i-amoxicillin ehlanganiswe ne-clavulanic acid.
I-Amoxicillin, noma i-amooticillin hydrate - i-antibiotic eyenziwe ngendlela engafani evela engxenyeni yepenicillin ye-beta-lactam. Ngezakhiwo zayo zamakhemikhali, i-Amoxicillin isondele ne-Ampicillin, kepha uma ithathwa ngomlomo, ine-bioavailability ephakeme. I-Amoxicillin isetshenziselwe i-bronchitis isikhathi eside, yadlula kuzo zonke izivivinyo ezingenzeka, lapho ikhwalithi eyodwa engathandeki yatholakala - ibhujiswa ngaphansi kwethonya lama-enzyme e-beta-lactamase akhiqizwa ngamagciwane athile. Ngenxa yalokho, ukusebenza kahle kwezidakamizwa kuncishisiwe.
Ngakho-ke, umuthi uvame ukwenziwa ngokuhlangana ne-clavulanic acid, ngakolunye uhlangothi, evimbela isenzo sama-enzyme, ngakolunye uhlangothi, isebenze njenge-antibiotic ezimele. Ngakho-ke, kwavela isidakamizwa esizimele i-Amoxiclav, sihlanganisa amagama azo zombili izakhi egameni futhi siphakeme kune-Amoxicillin ezimeni eziningi.
I-Clavulanic acid i-gravitates kuma-pecillinases - ama-enymes aqeda ama-veta-lactam ama-antibiotic (cephalosporins, penicillins). Kwakheka inhlanganisela ezinzile ene-enzyme, empeleni, into entsha evimbela ukubhujiswa kwe-amoxicillin.
Umuthi owenziwe ngokuhlanganisa i-Amoxicillin ne-beta-lactamase inhibitor ngenkuthalo ngokumelene namagciwane we-aerobic gram-positive:
Oku-Golide, nezinye izinhlobo eziningi ze-staphylococci,
ibhakithali ye-aerobic gram-negative, kufaka phakathi i-proteina, bordetella, moraxella,
Ukuhlanganiswa kwe-amoxicillin nge-clavulanic acid kukhulisa umsebenzi we-antimicrobial we-phagocytes egazini lomuntu. Ukuqina kwamasosha omzimba okulwa namagciwane we-pathogenic lapho isenzo se-antibiotic nawo sikhula khona.
Le mpahla ye-Amoxiclav iyanikeza imiphumela emihle ekwelapheni umkhuhlane obangelwa yi-pneumococcus . Kulokhu, ama-leukocytes ahlinzeka, ngolimi lwabasebenza ngamasosha, umugqa wokuqala wokuvikela ngokumelene namagciwane we-pathogenic.
ISumamed ne-Amoxiclav - amagama ahlukile isidakamizwa esifanayo noma izidakamizwa ezihlukile
ISumamed ne-Amoxiclav bangamaqembu ahlukahlukene emishanguzo ye-antibacterial futhi kunomehluko omkhulu phakathi kwabo. Into esebenzayo yeSumamed yi-azithromycin - i-antibiotic evela ema-macrolides amaningi.
Lesi sidakamizwa sinomphumela obizwa ngokuthi yi-bacteriostatic, obonwa ngokuvimbela ukwakheka kwamaprotheni kumaseli we-microorganisms. Lokhu kuholela ekungabikhona kokuzalwa kabusha kwabo futhi kubenza bazwele kakhulu emisebenzini yokuzivikela yomzimba.
I-Amoxiclav ine-penicillin antibiotic amooticillin kanye ne-clavulanic acid penicillinase inhibitor. Le ejenti yokuhlangana yamagciwane inomphumela we-bactericidal kumagciwane. I-Amoxicillin iyakwazi ukuphazamisa ukuthembeka kwezitho zamangqamuzana ezitshalo zezilwane, okuholela ekufeni kwabo. I-Clavulanic acid ivikela i-antibiotic kusuka ohlelweni oluvikelayo lwamagciwane amaningi - ukwakheka kwama-enzymes akhethekile aphula i-amooticillin. Lokhu kwandisa kakhulu isibuko sokuqokwa okungenzeka somuthi olwa namagciwane.
Iziguli zivame ukudida iSumamed ne-Amoxiclav ngenxa yamagama afanayo ezinto ezisebenzayo, futhi nangenxa yokuthi zibekelwe i-pathologies efanayo.
Amafomu wokukhishwa kwe-Amoxiclav
I-Amoxiclav ikhiqizwa ngamafomu womthamo oboniswe ngezansi:
kumathebhulethi aphekwe ngegobolondo elimhlophe noma elikhanyayo i-beige 125, 250, 500, 875 1000 mg,
ku-powder lapho kulungiswa khona isixazululo somjovo - 500 mg, 1000 mg,
ku-powder ekwakhekeni isiraphu yezingane, ukumiswa okuqukethe i-125 mg, 250 mg, 400 mg yomuthi.
Amoxiclav 125, itholakala njenge amaphilisi we-oval convex nhlangothi zombili kanjalo nangendlela ka-powder noma yokumiswa.
Ukwakheka kwe-powder yokumiswa kufaka:
Amoxicillin trihydrate - 125mg
Usawoti we-Clavulanic acid potassium - 31.25 mg,
I-Citric acid nosawoti wayo,
I-Carboxymethyl cellulose (isengezo sokudla i-E-466),
I-Sweetener - i-sodium cyclamate,
I-Amoxiclav 250 (Forte) nayo iyimpuphu lapho kulungiswa khona isiraphu, efanayo ekwakhiweni kwe-amoxiclav 125, kuphela inani lezakhi eziphambili kulo liphindwe kabili.
I-Amoxiclav 500, 625, 875, 1000 - amaphilisi, aqukethe inani lezinto ezisetshenziswayo. Isibonelo, i-Amoxiclav 1000 iqukethe i-1000 mg ye-antibiotic kanye ne-125 mg ye-clavulonic acid.
I-Amoxiclav Quicktab - amaphilisi asheshayo anongiwe ezithelo ube nama-2 amafomu wethebhulethi: lesi sidakamizwa siqukethe
I-500 mg ye-amoxicillin ne-125 mg ye-clavulanic acid,
I-875 mg ye-amoxicillin ne-125 mg ye-clavulanic acid.
Ekwelashweni kwezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, noma ukuba nesisindo somzimba esingaphansi kwamakhilogremu angama-40, i-Amoxiclav ngesimo amaphilisi ayinqunyelwe. Izingane zinikezwa ukumiswa ngesimo sesiraphu. Kwentsha engaphezu kweminyaka eyi-12 ubudala kanye nabantu abadala, kusungulwa imithamo elandelayo.
I-Amoxiclav ingabekwa izikhathi ezi-3 ngosuku njalo ngamahora ayi-8, noma izikhathi ezi-2 ngosuku, njalo emahoreni ayi-12. Ukwelashwa kungahlala kusuka ezinsukwini eziyisithupha kuya kwezingu-15, nokuthi isifundo kuzoba isikhathi esingakanani, nokuthi umuguli uzowuthola kumuphi umthamo, udokotela uthatha isinqumo.
Kuhlangene. Ukwakheka, ifomu lokukhulula, indlela yokufaka isicelo
Ukubizwa ngamagama kususelwa entweni ebizwa ngokuthi i-Azithromycin. I-Sumamed ingeyeqembu lama-macrolides. Inomphumela oqhubeka isikhathi eside, yehlisa ingozi yokutheleleka ngegciwane kusuka ekugxileni kokulimazeka kwezinye izitho nezicubu zomzimba. I-Sumamed icindezela umsebenzi obalulekile wamagciwane a-gram-positive ne-gram-negative, isebenza ngempumelelo kakhulu ngokumelene ne-staphylococcal kanye ne-streptococcal flora, kanye ne-mycoplasma, ureaplasma.
I-Sumamed ithengiswa ngalezi zinhlobo ezilandelayo:
Amacwecwe e-Convex aqoshwe ngomfanekiso, ahlanganiswe nefilimu eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokwokuqukethwe kwento esebenzayo kuyo, inemithamo emibili - 125 mg no-500 mg,
Powder wokwenza ukumiswa. Itholakala kumthamo we-100 mg ku-5 ml wezinto ezisebenzayo ngemuva kokulungiswa kokumiswa.Kukhona ne-powder yokulungiswa kokumiswa kokumiswa kwe-Sumamed forte, ngomthamo ka-200 mg ku-5 ml, otholakala kwizinguqulo eziningana - 15 ml we-powder, 30 ml no-37,5 ml, ukulungiswa kwawo kuyehluka kuphela esilinganisweni samanzi okumele sengezwe ebhodleleni ngento eyomile, ngakho-ke, cishe i-20 ml, 35 ml no-42 ml koketshezi oluphelile luyatholakala. I-Sumamed ne-Sumamed forte yokulungiselela ukumiswa akuyona into ehlukile, ngaphandle kokuqukethwe kwento esebenzayo ku-5 ml wokumiswa kokuqediwe,
Kumaphilisi omlomo we-gelatin. Ziqukethe i-250 mg ye-azithromycin.
Into esebenzayo yeSumamed yi-Azithromycin.
Ezinye izinto ezifakiwe ezifakiwe kufakwa phakathi:
isitashi se-hypromellose nesommbila,
ama-molecule we-calcium hydrogen phosphate ne-polysorbate,
sodium lauryl sulfate nezinhlayiya ze-titanium dioxide.
I-Sumamed powder iqukethe: i-azithromycin, i-trisodium phosphate, i-sucrose, i-xanth gum, i-colloidal silicon ne-titanium dioxide, i-hydroxypropyl cellulose. Ama-flavour ane-flavour ehlukene afakiwe ku-Sumamed powder.
Amaphilisi we-Sumamed afaka i-magnesium stearate, i-sodium lauryl sulfate, i-titanium dioxide, i-indigo carmine, i-gelatin.
Ukwelashwa kwe-Sumamed kwenziwa ngokwenziwa kwezifo zeziguli ezinjengokuthi:
i-tracheitis, i-bronchitis, i-bronchotracheitis,
inyumoniya, umkhuhlane obomvu, imidiya ye-otitis,
I-Sumamed isetshenziselwa ukwelapha izinqubo ze-pathological localised in izicubu ezithambile, izitho ze-ENT - njenge-impetigo, erysipelas, dermatosis yesibili, i-tonsillitis, i-otitis media.
ISumamed isetshenziselwa ukwelapha izifo ezithathelwanayo nezokuvuvukala zohlelo lomchamo: urethritis, cervicitis, chlamydia.
I-Sumamed akufanele isetshenziswe ezigulini:
ukuba ne-hypersensitivity yezinto ezifakiwe ekwakhekeni kwayo,
ngokuhluleka kwezinso kanye nesibindi,
Ukushintsha kwezinso ezinso ngenxa yezizathu ezahlukahlukene,
sithambekele ekuwohlokeni okubukhali empilweni yonke ngenxa yokwanda kokungezwani komzimba.
I-Amoxiclav iyatholakala ngezinhlobo ezilandelayo:
Amatafula atholwe emafilithini kumthamo we-250 mg, 500 mg no-875 mg we-amoxicillin, equkethe i-clavulanic acid esilinganisweni esifanayo - 125 mg,
I-Amoxiclav Quiktab, amaphilisi okuhlakazeka, ngomthamo ka-500 mg no-875 mg. I-Clavulanic acid nayo itholakala kumthamo ofanayo - 125 mg,
Powder. Ukumiswa kwenziwa kuwo, okuhloselwe ukusetshenziswa ngomlomo.
Noma ngabe isiguli sikhetha uhlobo luni, odokotela batusa ukuthi utadishe ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa umuthi okokuqala.
Izinto ezisebenzayo ze-Amoxiclav, kanye ne-Augmentin, yi-Amoxicillin ne-clavulanic acid, i-croscarmellose sodium.
I-Amoxiclav powder iqukethe izinto ezinjenge: benzonate ne-sodium citrate, i-mannitol.
Amathebulethi okusabalalisa e-Amoxiclav afaka izakhi ezinjenge-aspartame, i-iron ironide, i-microcrystalline silrate cellulose, i-colloidal anhydrous silicon dioxide, ukunambitheka okuhlukahlukene.
Imvamisa, abazali bathakazela udokotela wezingane ngalokho okunganikezwa ngokuthuthukiswa kwe-angina Sumamed noma i-Amoxiclav yezingane. Angaphendula lo mbuzo ngemuva kokuhlolwa nokuhlaziywa.
Imvamisa, i-Amoxiclav ichazwa ngongoti ekwakhiweni kwenqubo ye-pathological esegabheni eliphezulu lokuphefumula. Ngaphezu kwalokho, isetshenziswa emkhakheni we-otolaryngology, ukwelashwa, i-gynecology, i-orthopedics nokuhlinzwa.
I-Amoxiclav isetshenziswa ekwakheni:
inyumoniya ne-bronchitis engapheli,
bronchopneumonia kanye sinusitis,
i-pharyngeal abscesses kanye ne-otitis media, indlebe ephakathi,
i-tonsillitis engapheli kanye ne-periodontitis,
chancroid kanye ne-cystitis,
cholecystitis kanye ne-pyelonephritis,
I-Amoxiclav isetshenziswa futhi lapho umuntu eba nokutheleleka ngegciwane, uhlelo lomchamo, ngomonakalo wezicubu ezithambile, izibuko zesikhumba. Ngaphezu kwalokho, i-Amoxiclav imiselwe izinjongo ze-prophylactic ukuvikela ukuthuthukiswa kwe-purulent foci kanye ne-sepsis - kaningi lokhu kungenzeka ngemuva kokungenelela kokuhlinzwa ezithweni zangaphakathi.
Kodwa-ke, iSumamed ne-Amoxiclav ngeke zithathwe ngasikhathi sinye. Lokhu kungaholela ekuwohlokeni okubukhali esimweni sempilo esigulini esijwayelekile kanye nokuvela kwezinkinga ezinkulu.
Ngabe le mishanguzo isetshenziselwa izifo ezifanayo zamagciwane?
Uhlu lwezinkomba ze-Amoxiclav ne-Sumamed luyafana kakhulu, kepha lunokuhlukahluka okukhulu okuphawulekayo. Kungenxa yokuthi iqiniso lokuthi amalungiselelo e-azithromycin akhetha ezinye izinhlobo zezicubu ezinqwabelana kuwo. Ngakho-ke, iSumamed isetshenziswa ikakhulukazi kuma-pathologies wezicubu ezilandelayo nezinhlelo zesitho:
I-Amoxiclav, ngenxa yokungakhethi kwayo okuphansi kokungena kwe-amoxicillin nokuqongelela izicubu zomzimba, kwakha ukuhlangana okuningana kwenani elikhulu lezitho zomzimba. Ngakho-ke, le antibiotic inomkhawulo obanzi wokusetshenziswa. Ingongeza ngaphezu kwe-pathologies engenhla, ukusetshenziselwa ama-bacterium e-bacterics:
izitho zangasese zowesifazane zangaphakathi (isitho sangasese sowesifazane, isibeletho, amashubhu we-fallopian, ama-ovari),
i-gallbladder ne-bile ducts (cholecystitis, cholangitis),
isistimu yokugaya ukudla (i-gastritis, duodenitis, i-enteritis, i-colitis),
izicubu ezithambile, ezithintekayo kanye nesistimu yemisipha.
Kungani isikhathi sokwelashwa ngeSumamed ne-Amoxiclav nge-pathology efanayo kuhlukile
Lokhu kungenxa yezimpawu ze-pharmacological ze-metabolism of antibiotics. ISumamed inamandla okuqongelela izicubu zomzimba. Iphinde ingene ekugxiliseni kokuvuvukala, lapho ukuqina kwayo kungaba khona izikhathi eziyi-10-30 inani le-azithromycin egazini le-peripheral.
Ngemuva komthamo wokugcina umuthi, umthamo wawo wokwelapha uhlala kwizicubu cishe amahora angama-72.
E-Amoxiclav, imetabolism yenzeka ngendlela ehlukile. I-Amoxicillin ingena kwezicubu zomzimba yimbi kakhulu. Ngasikhathi sinye, umuthi olwa namagciwane usheshe ukhishwe ezinso. Ngakho-ke, ukuze ulondoloze ukugxilisa ukwelashwa egazini, kuyadingeka ukuthatha imithamo emisha yomuthi njalo.
Imvamisa, isikhathi sokulashwa ngeSumamed siyizinsuku ezingama-2-3 sifushane kunokuba sine-Amoxiclav.
Uma isiguli singayidli i-Amoxiclav, iSumamed ingasetjenziswa
Impendulo inguyebo - yebo, ungakwenza. Ukwalana ne-Amoxiclav kubangelwa i-hypersensitivity kufomu le-beta-lactam. Lezi zokugcina zifaka ama-penicillin, ama-cephalosporins, ama-monobactams nama-carbapenems. Uma kunomlando wokuphendula kokungezwani komuthi kunoma imuphi umuthi kulawa maqembu, kubalulekile ukunquma enye i-antibiotic enesakhiwo esihluke ngokuphelele sama-molecule.
Lokhu kubaluleke kakhulu ezinganeni ezine-allergic diathesis nokuthambekela kokuthuthukisa i-Quincke edema kanye ne-anaphylactic shock.
Ngokwezincomo zamanje zokwelashwa kwama-bacterius ama-pathologies, ama-macrolides ayizidakamizwa zokukhetha kulesi simo. Abanayo ngokuphelele indlela yokuphendula nge-penicillin, okwenza iSumamed ibe yindlela yokwelashwa ephephile yeziguli ezinokungezwani ne-Amoxiclav.
Yimuphi umuthi ongasetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa
Ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa, kunconywa ukunquma i-Amoxiclav. Lokhu kungenxa yomphumela ophansi we-teratogenic otholwa yizo zonke izidakamizwa ze-penicillin antibacterial. I-American FDA yanikeza isigaba se-Amoxiclav B, esikhombisa ukuthi lesi sidakamizwa singathathwa ngesikhathi sokukhulelwa nokuthi abukho ubufakazi bemiphumela enobuthi engxenyeni yokubeletha.
I-Azithromycin, okuyinto esebenzayo yeSumamed, ingena egazini le-fetus ngenani elingabalulekanga, elenza sikwazi ukucabanga ngomthelela wayo ongemuhle kuyo.
Ngakho-ke, lesi sidakamizwa kumele sinqunywe ezimweni ngesikhathi sokukhulelwa, lapho izinzuzo zokuqokwa zingadlula kakhulu ukulimala.
Yisiphi isidakamizwa esiphephe ezinganeni
Bobabili iSumamed ne-Amoxiclav bayizidakamizwa eziphephile ezinganeni zanoma ibuphi ubudala, kusukela ngenyanga yokuqala yokuphila. Kunconywe ukuthi zisetshenziswe emisebenzini yezingane yizinhlangano ezikhethekile zodokotela ezihola phambili emhlabeni.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa isikhathi eside kubonise ukuthi izehlakalo zemiphumela emibi ezinganeni azihlukile kakhulu kubantu abadala. Kodwa-ke, ngaphambi kokusebenzisa kokuqala kwe-Amoxiclav kunconywa ukwenza ukuhlolwa kwe-hypersensitivity kulo muthi.
Ikakhulu ezinganeni, izinkampani zokukhiqiza zikhiqiza i-antibiotic ngendlela yesiraphu. Lokhu kusiza ukukhipha ngokunembile inani elifunekayo lomuthi, kuya ngeminyaka nangesisindo somzimba sengane.
Ungazithatha kanjani zombili izidakamizwa zokulwa namagciwane
Ama-antibiotic ahlukaniswa njengezidakamizwa ezihlelekile ezisebenza ezinhlelweni ezehlukene emzimbeni wesiguli. Ngakho-ke, awukwazi ukuzindla futhi uthathe i-Amoxiclav noma i-Sumamed ngaphandle kokuqokwa kukadokotela ofanelekayo.
Njengoba umkhuba ukhombisa, ukungawunaki lo mthetho olula uvame ukuholela ekwakhiweni kwezinkinga, imiphumela emibi kanye nokungabikho komphumela womtholampilo ekuphuzeni umuthi.
Omunye umthelela omubi ukubukeka kwamagciwane alwa nemithi elwa namagciwane, ekwelashweni kwawo kubalulekile ukusebenzisa amanye amaqembu ezidakamizwa.
Ukuhlolwa kokusebenza ngempumelelo kokuthatha i-antibiotic kuvame ukwenziwa amahora angama-48-72 ngemuva kokuqala kokwelashwa. Kucatshangelwa ukuguqulwa kwezinga lokushisa lomzimba, ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile kanye nesimo sesiguli. Ngomkhuba omuhle, ukwelashwa ngomuthi okhethiwe kuyaqhubeka. Uma ungekho umphumela odingekile, umuthi olwa namagciwane kufanele ushintshwe.
Kuyadingeka ukuthatha umuthi olwa namagciwane ngasikhathi sinye sosuku ukuze uqinisekise ukuthi umuntu unegazi elanele egazini. Uma uphuthelwa ukungena, udinga ukuthatha umthamo wezidakamizwa ngokushesha okukhulu, bese uqhubeka nenkambo yokwelapha njengokujwayelekile.
Ungaphuza ithebhulethi noma isiraphu yesidakamizwa kuphela ngamanzi angenalutho. Awungeke usebenzise i-soda, imikhiqizo yobisi, ikofi noma itiye elinamandla ngale njongo, ngoba ingashintsha ukumuncwa kanye nokudla kwama-antibiotic, okukhonjiswa ngendlela engeyiyo emiphumeleni yokwelashwa.
Akunconyelwe ukukhansela i-antibiotic ngokwayo ezimpawu zokuqala zokuthuthuka kwesimo esejwayelekile.
Lokhu kungavusa ukukhula kwamagciwane okumelana nomuthi, kanye nokuphindeka kwalesi sifo. Udokotela okhona kuphela onelungelo lokukhansela iSumamed noma i-Amoxiclav.
Okufanele ukwenze uma imiphumela emibi ivela ekuthatheni iSumamed noma i-Amoxiclav
Uma uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela emibi ngokuthatha le mithi elwa namagciwane, kufanele uthinte abasebenzi bezokwelapha noma udokotela wakho ngokushesha.
Ngasikhathi sinye, kufanele kuqondwe ukuthi ukuba khona kwabo kuphela akuyona inkomba ephelele yokuhoxiswa kwezidakamizwa.
Izimpawu ze-dyspeptic, ukuphathwa ikhanda, ukwanda okuncane kokuxineka kwama-enzinine noma ama-enzyme wesibindi ku-plasma yegazi kungaba nje umphumela wokuphuza umuthi, kodwa futhi ne-bacteriology uqobo. Uma ukuvela kwabo kubangelwa ngokuqondile ukusetshenziswa kwama-antibiotic, khona-ke cishe kuzo zonke izimo lokhu kuhlangana ngokushesha kwesifo ngemuva kokuphela kwenkambo yokwelashwa.
Yisiphi isidakamizwa esibizayo
ISumamed yisidakamizwa se-antibacterial esinegama elivela enkampanini yezemithi yaseCroatia, iPliva, eyaqala ukwenziwa ngonyaka ka-1980. I-Amoxiclav iyi-generic, ekhiqizwa yinkampani yaseSlovenia "Lek".Kungaleso sizathu ukuthi i-Sumamed emaketangeni ekhemisi atholakalayo ibiza kakhulu kune-Amoxiclav.
Ividiyo ikhuluma ngokuthi ungalashwa kanjani ngokushesha umkhuhlane, umkhuhlane noma i-SARS. Umbono kadokotela onolwazi.
Into esebenzayo ye-antibiotic yi-azithromycin. Umuthi unomphumela wegciwane elishiwoyo. Indlela yokusebenza yayo kungukuvimbela kokuhlanganiswa kwamaprotheni ngaphakathi kwamaseli we-pathogenic microorganisms, ngenxa yokuthi inqubo yokuqhubeka kokuthuthukiswa kwamangqamuzana nokuzala iyama. Izinkomba ezisetshenziswayo:
Izifo ezithathelwanayo zomgudu wokuphefumula: inyumoniya, i-bronchitis engapheli kanye nehlala isikhathi eside, i-laryngitis, i-tracheitis,
Izifo ze-ENT: i-sinusitis, i-tonsillitis, i-pharyngitis, imidiya ye-otitis, i-tonsillitis,
izilonda zesikhumba ezithathelwanayo, ngokwesibonelo, i-erythema yokufuduka,
izifo zohlelo lwe-genitourinary: chlamydia, izifo ezidluliselwa ngokuxhumana ngocansi nokuba nenkambo emnene.
Ukuxhumana ngokuqokwa kweSumamed yilezi:
ukungabekezelelani komuntu ngamunye ezingxenyeni ngazinye zomuthi,
amacala okusabela komzimba esikhathini esidlule nokusetshenziswa kwama-antibiotics nge-azithromycin.
Umuthi obulala amagciwane ezibhebheni unganikezwa izingane kuphela uma isisindo sengane singama-45 kg noma ngaphezulu.
Le antibiotic yemvelaphi yamagciwane ngesikhathi sokuzivocavoca ichazwe kuphela uma udokotela enquma ukuthi umphumela omuhle ngokusetshenziswa kwawo udlula ubungozi bezimpawu eziseceleni nezinye izinkinga.
Umuthi uthathwa amahora 1 noma amabili ngaphambi kokudla okuyinhloko. Ifomu lokukhululwa ngamathebulethi (athathwe wonke ngaphandle kokuhlafuna) ne-powder yokulungiselela ukumiswa.
I-candidiasis kulwelwesi lwe-mucous lomlomo wesibeletho, kwabesifazane - ama-candidiasis angabesifazane,
i-leukopenia iyimpawu engathandeki eseceleni
ukuphazamiseka kokulala, ukwesaba okwandayo,
ukuphazamiseka kwesistimu yokugaya ukudla - isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo,
ukuvela komzimba esikhumbeni,
I-Sumamed ithathwa ngezifo ezithathelwanayo zomgudu wokuphefumula, inyumoniya, i-laryngitis, i-tracheitis.
Umthamo wokwelapha ekwelapheni izifo ezithathelwanayo ngamathebulethi ama-3 ngosuku, athathelwa umthamo owodwa. Ukwelashwa kwezifo ezithathelwana ngocansi - umthamo owodwa wamathebulethi ayi-4. Ukwelashwa kwezifo zesikhumba ezithathelwanayo - ngosuku lokuqala ama-4 ama-PC., Izinsuku ezi-4 ezilandelayo, ama-2 ama-PC. ngosuku. Inkambo yokwelashwa ngemithi elwa namagciwane yizinsuku ezi-5.
Ukuphathwa kwe-Amoxiclav intravenous
I-Amoxiclav powder yomjovo we-intravenous uqukethe izingxenye ezi-5 ze-Amoxicillin nengxenye eyodwa ye-clavulanic acid.
Ngomjovo kumuntu omdala, u-600 mg wesidakamizwa ufakwa ku-10 ml wamanzi wokujova. Ngokuhambisana, ibhodlela eliqukethe amagremu ayi-1,2, uzodingeka u-20 ml we-injection liquid. Isixazululo sifakwa emthanjeni imizuzu emi-3-4. Ngokuphathwa kwe-Drip kwabazali, kufakwa i-50 noma i-100 ml yesisombululo sokufakwa. Ukufakwa kwethonsi kwekhambi kuthatha imizuzu engama-30 kuya kwengama-40.
Ukujova okulungele ukusetshenziswa kufanele kusetshenziswe kungakapheli imizuzu engama-20 . Gcina futhi ikakhulukazi ungafriji umuthi oxutshwe.
Ukuqhathanisa kweSumamed ne-Amoxiclav
Kunokufana okuningi phakathi kwama-2 ama-antibiotic, kepha kunomehluko omkhulu.
Izici ezifanayo zifaka phakathi:
Zombili lezi zidakamizwa zibekelwe i-pathologies efanayo.
Indlela yokukhululwa - amaphilisi kanye ne-powder yokumiswa.
Ngendlela efanelekile ekwelashweni kweziguli zabantu abadala nokuzilolonga kwengane.
Yimithi yokusetshenziswa okuhleliwe kwesilinganiso esikhulu sokwenza.Banomphumela ezinhlelweni eziningi emzimbeni, futhi ngenxa yalokho banezimpawu eziningi ezinjalo - izifo ezithathelanayo zohlelo lokuphefumula, uhlelo lwesitho sofuzo kanye nesikhumba.
Izithako ezifanayo ezisizayo ezizalwa ngezindlela ezahlukahlukene zokukhishwa.
Naphezu kweqiniso lokuthi ziyabekezelelwa kahle iziguli, ukuphuza kwazo kuvame ukuhambisana nokuphazamiseka kohlelo lokugaya ukudla - umuzwa wobunzima esiswini, i-dysbiosis.
Azithinti ukuhanjiswa koshukela egazini, ngakho-ke isifo esifana nesifo sikashukela asikona ukweqa ekusebenziseni zombili izidakamizwa ze-antibacterial.
Imithi ingeyamaqembu ehlukene okwelapha: I-Sumamed - macrolides, Amoxiclav - ama-penicillin ama-antibiotic.
I-Sumamed inempahla yokuqongelela izicubu ezithambile, ngenxa yokuthi inani layo emzimbeni lihlala lingaguquki isikhathi esithile. I-metabolism yezakhi eziphambili ze-Amoxiclav yenziwa ngendlela ehlukile, isheshe ikhishwe emzimbeni ngokusebenzisa izinso ngemikhiqizo eyenziwe ngemikhiqizo. Kulokhu, i-Amoxiclav ivame ukuthathwa. Ukwelashwa kweSumamed kuhlala izinsuku ezimbalwa.
Kunzima ukuqhathanisa ukusebenza kwezidakamizwa zombili ze-antibacterial, njengoba Ukusebenza kwesicelo kuncike ezicini eziningana - ubunzima be-microflora ye-pathogenic, ubukhulu becala lomtholampilo kanye nezimpawu zomzimba ngamunye.
Ngenxa yokuthi iSumamed iqongelela izicubu zephutha, ekwelapheni i-pathology efanayo, izosebenza isikhathi eside kune-Amoxiclav. Kepha lokhu akusho ukuthi lesi sidakamizwa sinamandla, siyomane siphuzwe kumthamo ophansi hhayi kaningi njengomuthi wesibili.
Yikuphi okungcono - ISumamed noma i-Amoxiclav?
I-Sumamed isebenza ngokushesha, kepha inohlu olukhudlwana lwe-contraindication. I-Amoxiclav ibonakala ngesenzo esisheshayo, inkambo yokusebenzisa kwayo isebenza izinsuku ezimbalwa, kepha uhlu lwe-contraindication lincane, kanye nokubonakala kwezimpawu eziseceleni.
Lezi zindlela zombili zisetshenziselwa umkhuba wezingane, kepha kukhethwa i-Amoxiclav. inomphumela omnene futhi omnene emzimbeni futhi mancane amathuba okuba kubange ukungezwani okuhle. Kepha uma icala likhulu, isifo esithathelwanayo siba nesibonakaliso esinamandla, ukwelashwa kuzobe sekwenziwa kakhulu yiSumamed.
Ukubuyekezwa kweziguli ku-Sumamed ne-Amoxiclav
UMarina, oneminyaka engama-34, eMoscow: “Nginikeza i-Amoxiclav ezinganeni uma kunomphimbo obuhlungu noma i-bronchitis, futhi mina nomyeni wami siphuza iSumamed. I-Amoxiclav isebenza ngokuthambile, kanti iSumamed, njengoba kuchazwa udokotela wezingane, kunconywa ukuthi anikeze izingane kuphela uma ukutheleleka kubi kakhulu, kanti namanye ama-antibiotic awasizi noma enza kancane kancane. "
UVadim, oneminyaka engama-36, uStary Oskol: “Ukwelashwa kwe-bronchitis, udokotela unqume ukuthi uSumamed. Usuku lokuqala lokusetshenziswa kwalo lwahamba kahle, ngaze ngazizwa ngingcono, kepha ke kwaqala ukubonakala izimpawu eziseceleni - ukulimala kwami ​​esiswini, ngangigula njalo, ngangizizwa nginesiyezi. Udokotela wachaza lokhu ngokuthi anginakubekezelela izakhi, ngakho-ke ngabeka i-Amoxiclav. Ngayidlulisela le mithi elwa namagciwane ngokuvamile, ngaphandle kwezinkinga, futhi yangisiza ngokushesha. ”
U-Ana, oneminyaka engama-24, uP Pskov: “Ngavele ngabulawa yi-Amoxiclav. Udokotela waphawula ukuthi angibekezeleli ama-penicillin. Futhi uSumamed uwuthathe kahle umzimba wami. Ngisho neqiniso lokuthi iningi lamaphilisi alwa nama-dysbiosis, lokhu akwenzekanga. ”
UTamara, 52, udokotela wezingane, uMurmansk: “Yomibili le mishanguzo imiselwe izingane, kodwa ngobuningi obuhlukile. I-Amoxiclav kuma-pediatrics ayathandwa, ngoba akuvamile kudala imiphumela emibi; izingane zithanda ukunambitheka kokumiswa. Futhi ama-Sumamed angaba usizo ekuthelelekeni okuthelelekile noma uma isifo sinaso isithombe sasemtholampilo.Ukuziqhathanisa kuyinkinga impela, ngoba izidakamizwa zingamaqembu ehlukene ekhemisi, yize zinokulingana okufanayo kwesenzo. "
U-Irina, oneminyaka engama-39, udokotela wezokwelapha, u-Perm: “I-Sumamed iyi-antibiotic enamandla, isiza kangcono futhi isheshe uma uyiqhathanisa ne-Amoxiclav. Kepha kusukela amaqembu abo ahlukile, abekwe ezimweni ezihlukene zomtholampilo ezinamandla ahlukahlukene enkambiso yezifo. ”
I-Amoxiclav inomphumela ongathandeki ekusebenzeni kwezinso, ngakho-ke iziguli ezihlulwa yizinso zidinga ukuncishiswa komthamo, noma ukwanda ngesikhathi esiphakathi komthamo womuthi.
I-Amoxiclav ayinconywa ezinganeni ezincane ngaphandle kokuyalelwa ngudokotela. Uma kunesidingo, udokotela uqobo uzonikeza umuthi ezigulini ezincane, ngisho nakuqala kokuphila kwakhe. Kubalulekile ukuqaphela umthamo kanye nokuhlatshwa kwezidakamizwa.
Isilinganiso esiqondile somuthi esibekelwe izinsana ngokuqinisekile kufanele sinake isisindo sazo. Ezinganeni ezisuka ezinyangeni ezi-3 kuye kweziyi-12 ubudala noma ezinesisindo esingaphansi kwamakhilogremu angama-40 ezinama-pathologies athelelekile wokutheleleka, indlela ejwayelekile yansuku zonke ye-Amoxiclav inqunywa ngesilinganiso sama-25 mg nge-1 kg yesisindo. Ngokusekelwa kweqiniso lokuthi umuthi unikezwa amahlandla ama-2-3, ivolumu yansuku zonke yezidakamizwa ihlukaniswe ngamasheya ama-2 noma ama-3. Isibonelo, ingane inesisindo esingu-8 kg. Ngakho-ke, isabelo esisodwa somuthi singama-25x8: 2 = 100 mg, ngokususelwa ekubalweni kwe-Amoxicillin. Kwezifo ezinzima, nsuku zonke, ngokulandelana, isilinganiso sesikhathi esisodwa siphinda kabili.
Ezinganeni ukuya ezinyangeni ezi-3, umuthi unikezwa amahlandla ama-2 ngosuku, kuyilapho isilinganiso sansuku zonke somuthi singama-30 mg nge-1 kg yesisindo. Uma ingane, ngokwesibonelo, inesisindo esingu-4 kg, umthamo wansuku zonke uzoba ngu-120 mg, ngokulandelana, umthamo owodwa uzoba - 60 mg.
Imithamo ekhonjisiwe, isisindo somzimba wengane kumele futhi icatshangwe ngesikhathi sokumiswa kokumiswa. Okokuqala, ibhodlela eline-powder liyanyakaziswa, bese lengezwa ngamanzi afudumele abilisiwe emithanjeni emi-2. Ngasikhathi sinye, kumele inyakaziswe ngaso sonke isikhathi ukuze okuqukethwe kuncibilike ngokuphelele. Ephaketheni, isipuni sokulinganisa esine-5 ml yesisombululo sinamathiselwe kwimpuphu yesiraphu.
Imiphumela emibi ye-Amoxiclav kanye ne-contraindication
Iziguli ezithatha i-Amoxiclav zingase zithole okulandelayo imiphumela emibi . Imvamisa, ipheshana lesisu libangela inkathazo. Ukuthatha umuthi kungahle kuhanjiswe
Isicanucanu esihambisana nokuhlanza
Kukhona amathuba ezinye izinqubo zokuvuvukala, isibonelo, i-stomatitis, i-vaginitis, i-colitis. Iziguli ezidingwa yi-allergic zithambekele ekumisweni, imivimbo ngesimo se-urticaria.
I-Amoxiclav ivame ukuthathwa njengekhambi le-bronchitis, kepha ukungahambi kahle kuma-penicillin kungaholela ku-bronchospasm, angioedema, futhi ezimweni ezingavamile, ukwethuka kwe-anaphylactic.
Amaqiniso aqhelelene ayaziwa. lapho umsebenzi wesibindi uphazamiseka ngaphansi kwethonya lomuthi, kunezimpawu ze-hepatitis, izinga lokudluliselwa egazini landa. I-Amoxiclav nayo iphikisiwe ku-mononucleosis ethelelekayo.
Ngakho-ke, ngaphambi kokubeka umuthi, udokotela kufanele aqinisekise ukuthi isiguli asigulisi ama-penicillin, i-cephalosporins noma i-clavulonic acid. Ukubhekisisa ikakhulukazi kufanele kukhokhwe ezigulini ezincane.
Ukusetshenziswa kwaleli gciwane ngesikhathi sokuzala ingane kuvunyelwe, kepha kungaphansi kokuhlolwa udokotela futhi uma kunezizathu ezanele. Awukwazi ukuthatha kalula le-antibiotic, futhi akukhuthaziwe ukuthatha lesi sinqumo njengekhambi lazo zonke izifo.
Yize kunezexwayiso ezingathi sína mayelana ne-contraindication kanye "nemiphumela emibi," ukubuyekezwa kulezi zinkundla kusikisela ukuthi i-Amoxiclav ibonwa kangcono ukwedlula amanye ama-antibiotic.
I-Amoxiclav ezifweni zezifo ezingama-bronchitis kanye nomphimbo. Yiziphi izidakamizwa futhi eziphatha i-bronchitis?
Uma kungekho contraindication, i-Amoxiclav isetshenziswa ngempumelelo ekwelapheni ipheshana lokuphefumula eliphezulu kanye ne-bronchitis okubangelwa yi-microflora ezwela umuthi. Kunconyelwa ukuthi izingane zinikezwe ukumiswa, ngoba isiraphu "lithambisa" umphimbo, futhi ngaleyo ndlela izinto ezisebenzayo zomuthi ziqala ukwenza ngqo ekugxileni kokuvuvukala umphimbo kanye ne-bronchi. Isiraphu imnandi ukunambitheka.Izingane zithanda ukuphuza ngentokozo enkulu kunamaphilisi.
I-Aminopenicillins, iqembu elihlanganisa i-Amoxiclav, i-Amoxicillin, i-Augmentin, ubheke ukwelashwa okungcono kakhulu kwe-bronchitis , ngoba amboza iqembu elibanzi lamagciwane adala izifo zesifo se-bronchial. Okuwukuphela kokubuyiselwa kwaleli qembu lezidakamizwa ukungabelani kwama-penicillin.
I-Augmentin inguphawu lomuthi, i-analogue ye-Amoxiclav, lapho ihluka khona kuphela kubaxulisi abathinta ukunambitheka kwamathebhulethi nama-syrups. Izinto ezisebenzayo ezikulo ziyafana: i-amoxicillin + clavulonic acid.
Into esebenzayo yeFlemoxin yi-Amoxicillin
i-trihydrate, kepha ayinayo i-clavulonic acid.
Okufakiwe yisidakamizwa esivela kuqweqwe le-azalides. Isakhi sayo esiyinhloko yi-azithromycin. Lokhu akusho ukuthi ama-azalides, noma amanye ama-antibiotic, angcono noma amabi kune-penicillin yemvelo neyenziwe. Bahlukile nje. Umuthi oshiwo we-bronchitis kufanele unqunywe ngokutheleleka kwamagciwane okufanele. Ngakho-ke, ukukhetha nenhloso yesidakamizwa kufanele kwenziwe kuphela ngemuva kokuzimisela kwelabhoratri lesifo se-causative sesifo, uma kunezinkomba kanye nokuphambana komuthi othize, kucatshangelwa ukuhambisana nezinye izidakamizwa.
Kanye nemithi, usebenzise ngempumelelo izixhobo ze-Almag ze-bronchitis . Ngaphansi kwethonya le-magnetotherapy, amaseli we-bronchial ayenziwa kabusha, isenzo semithi elwa namagciwane nama-bronchodilators siyathuthukiswa.
Ukusebenzisana kwe-Amoxiclav nezinye izidakamizwa
Abantu banamuhla, ikakhulukazi asebekhulile, bavame ukuhlaselwa yizifo eziningana, njengoba besho, benenqwaba yezifo lapho kuthathwa imishanguzo yemithi ehlukahlukene.
Futhi njengoba i-Amoxiclav ingesona isidakamizwa esilula esinomthelela omkhulu emzimbeni, futhi siqukethe izakhi zamakhemikhali, ikwazi ukuxhumana nezakhi zezinye izidakamizwa , udinga ukubheka ukuhambisana kwabo noma, okuphambene nalokho, ukungasebenzi kwemithi ehlukile.
Nge-methotrexate - ingozi yokwanda kobuthi iyakhula,
Ngama-anticoagulants - ukuhlangana kwegazi kuyancipha
Nge-Allopurinol - kuvame ukuholela ekwakhiweni kwe-exanthema, isifo esiyinkimbinkimbi esithinta isikhumba, ama-lymph node nezinye izitho zomzimba.
Nge-probenecid, ukuqedwa kwe-amoxicillin emzimbeni kunciphisa, okuholela ekuqongeleleni kwayo.
Ngokuhlanganiswa ne-macrolide, i-tetracycline kanye namanye ama-antibiotic amaningi, isibonelo, lapho iBiseptol isetshenziselwa i-bronchitis, umsebenzi we-Amoxiclav uyancipha.
Lesi sidakamizwa asihambelani nezixazululo zomzimba, eziqukethe igazi, amaprotheni, ama-lipids, ushukela. I-Amoxiclav ayikwazi ukuxutshwa kusipaki esifanayo neminye imithi.
Abesifazane kufanele bazi ukuthi lesi sidakamizwa sinciphisa ukusebenza kwezinye izidakamizwa zokulawula ukuzalwa.
Ama-antibiotic ama-bronchitis kubantu abadala, futhi ikakhulukazi ezinganeni, akhethwa futhi anqunywe ngemuva kokuhlolwa okuningiliziwe, ukuhlolwa nokuxilongwa okunembile. Ikakhulu ngokucophelela, ukuhlolwa okunjalo kufanele kwenziwe uma kutholwa i-bronchitis eyinhloko eyingozi.
Ukuqhathanisa kwe-Amoxiclav ne-Sumamed
Ngokuthuthuka emzimbeni wesiguli senqubo yokutheleleka nokuvuvukala yohlobo lwamagciwane, odokotela ngokuyinhloko banquma izidakamizwa ze-antibacterial. I-Amoxiclav ne-Sumamed kubhekwa njengelinye lama-antibiotic anqunyiwe aziwa kakhulu.Akhiqizwa ngezindlela ezahlukahlukene, ngakho-ke isiguli singazikhethela ifomu elifanele kakhulu. Ukuthenga eyodwa yazo, iziguli zivame ukuzibuza lo mbuzo: uyini umehluko phakathi kweSumamed ne-Amoksiklav? Yikuphi kule mishanguzo esebenza ngempumelelo futhi okuncane kunethonya elibi empilweni yabantu - sizokusho esihlokweni.
I-Amoxiclav ayinqunyelwe kumacala alandelayo:
ngokukhula kweziguli zezifo ezinjenge-cholestatic jaundice, i-lymphocytic leukemia, ukwehluleka kwesibindi,
ngokubhebhetheka okubukhali komzimba,
nokuzwela okuphezulu kuzakhi zawo,
abesifazane abancelisa noma abazala ingane, ikakhulukazi ku-trimester yokuqala. Ingasetshenziswa uma izinzuzo zokusetshenziswa kwayo kowesifazane ziphezulu kakhulu kunobungozi obuyobekwa enganeni.
Umehluko wabo oyinhloko:
ISumamed ne-Amoxiclav yizinhlobo ezihlukile zama-antibacterial agents: I-Sumamed yi-macrolide antibiotic, kanti i-Amoxiclav iyi-penicillin ye-antibacterial,
Kubandakanya izinto ezahlukahlukene ezisebenzayo,
I-Amoxiclav, ngokungafani neSumamed, iyatholakala kumathebulethi ahlakazeka kahle ancibilika kahle emanzini futhi angasetshenziswa ngabantu abanenkinga yokugwinya, kanye nezingane ezincane,
I-Sumamed, ngokungafani ne-Amoxiclav, udinga ukusebenzisa izinsuku ezi-3 kuphela. Ngenxa yalokho, umphumela omuhle uyeza ngokushesha ekusebenziseni kwawo,
I-Amoxiclav inohlu oluncane lwe-contraindication kuqhathaniswa neSumamed,
I-Amoxiclav isiza ukuqeda lezo zifo ezingeke zelaphe ngomuthi onjengeSumamed,
I-analogue eshibhile yeSumamed yi-Azithromycin, ethathwa njengesakhi esisebenzayo se-Amoxiclav.
Njengomphumela wokuqhathanisa iSumamed ne-Amoksiklav, akunakwenzeka ukuphendula ngokungangabazeki umbuzo wokuthi yikuphi okuhle kubo. Ngayinye yazo inenani elithile lezimpawu ezinhle nezingalungile. Kuzonqunywa ukuthi kuzoba ngcono ukuthatha isinyathelo ngesiguli esithile, kunguchwepheshe onolwazi kuphela ongakwazi.
U-Anna Moschovis udokotela womndeni.
I-Sumamed noma i-Amoxiclav - okungcono futhi yini umehluko?
Imvamisa, ezifweni ezinhlobonhlobo zamagciwane, kunqunywa imishanguzo eqenjini elithile. Izidakamizwa ezisebenzayo nezisetshenziswa kabanzi yi-Amoxiclav neSumamed.
Kuhlanganiswe: ngokuningiliziwe mayelana nomuthi
I-Sumamed umuthi oyingxenye yeqembu le-macrolide elwa namagciwane. Kuyi-azalide enesenzo esime isikhathi eside. Ivimbela ukukhula nokukhiqizwa kwamagciwane we-pathogenic akhula ekugxiliseni kokuvuvukala.
Ama-microorganisms wegram-positive ne-gram-negative azwela i-Sumamed. Isebenza kahle kakhulu kuma-staphylococci naku-streptococci, mycoplasmas, ureaplasmas.
Amaphilisi we-milligram angama-250.Ama-gelatinous, ane-cap cap eluhlaza okwesibhakabhaka nomzimba oluhlaza okwesibhakabhaka. Amaphilisi aqukethe into enobuthi ophuzi okhanyayo noma umbala omhlophe.
Incazelo evamile ye-amooticlav
I-Amoxiclav iyi-antibiotic ebanzi ebanzi etholakala ku-amooticillin. Le yi-analogue yayo, ebhekwa njengotshintsho lwesimanjemanje ngokuhlanganiswa kwe-clavulanic acid. Ibuye inciphise ukubola kwe-antibiotic (yandisa isikhathi sokusebenza) futhi ikuvumela ukuba wenze umuthi ngendlela yamathebulethi, ukumiswa kokulungiswa kwekhambi, hhayi nje ngomjovo.
Ngombono wokubheka kwemithi, i-amooticlav ibhekisela kuma-penicillin, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo kufanele kungafakwanga masinyane kulabo ababanga ukungahambi kahle. Yikuphi ukutheleleka i-amooticlav okusebenzayo? Ngenxa yobukhona be-beta-lactamase ekwakhiweni kwayo, ibhubhisa kalula:
i-aerobic microorganisms (i-gram-positive ne-gram-negative).
Lolu uhlu olucishe luphelele lwalezo zifo ezenza i-angina. Kunconywa ukuthi ingane inikezwe i-amooticlav njenge-syrup noma njengesixazululo samanzi (kusuka ku-ampoule). Inketho yokugcina ivunyelwe ngisho nasezinganeni, kuyilapho amaphilisi kanye ne-powder, ngokwezincomo zomenzi, zivunyelwe ukuthathwa kuphela kusukela eminyakeni eyi-12. Umthamo omkhulu wansuku zonke ama-milligram angama-45 ngekhilogremu elilodwa lesisindo somzimba bukhoma. Inketho engcono kakhulu ngama-milligram angama-30, njengoba kukhonjisiwe ngemiyalo yokusebenzisa. Kunconywa ukuphatha umuthi ngemithamo emi-3-4 ngezikhathi ezithile zesikhathi (njalo ngamahora angama-6-8).
Contraindication ekwamukelweni kwayo yile:
izifo ezibangelwa yigciwane le-gastrointestinal.
Imiphumela emibi elandelayo iyenzeka lapho uthatha: i-allergy, jaundice, i-lymphocytic leukemia, ukungasebenzi kwesibindi, ukungezwani komzimba, i-migraines, isiyezi.
I-Azithromycin iyi-antibiotic ebanzi engabonakali enomphumela omude (isuswa emzimbeni isikhathi eside). Kungenxa yesisekelo sayo ukuthi kudalwe ukuthi kwenziwa isamba. Kungokweqembu le-macrolide. Kuvame ukubekelwa phambi kokungezwani ne-penicillin, lokhu ngumehluko wawo ophambili ne-amoxiclav.
I-Azithromycin - isisekelo samanani Kuhlangene
Kubhekwa njengesidakamizwa esiphephile esimweni esithile, ngoba sisebenza ngezinga le-intracellular lapho kugxilwa okuthile ku-plasma yegazi (10 mg ngekhilogremu yesisindo bukhoma). Amathebulethi agcina ukugxilwa ezingeni le-0,4 mg / l lento esebenzayo yezinsuku ezingama-5-7 ngemuva kokuphela kwenkambo yokuphatha.
Isebenza emaqenjini afanayo wamagciwane njenge-amoxiclav, kepha ayisebenzi ekuthelelekeni nge-gram-positive okumelana ne-erythromycin. Lomthamo wanele ukunikeza umphumela we-bactericidal wesibili, ovimbela ukutheleleka kwesibili noma ukuthuthukiswa kwezinkinga.Noma kunjalo, iyi-antibiotic, ngakho-ke kunconywa ukuyisebenzisa kanye nokwelashwa kwe-immunomodulating (noma ukusetshenziswa kwama-probiotic).
Kuthathwa isikhathi esingu-1 ngosuku (ithebhulethi engu-0.5 / 1, kuye ngeminyaka yesiguli). Inkambo ephezulu evunyelwe yokwelashwa yizinsuku ezingama-30, kepha izinsuku ezingama-5 zanele ukuphatha umphimbo obuhlungu.
Ikhishwe ngokwahlukana futhi ifakwa ezinganeni. Akunqatshelwe, kepha akunconywa ebuntwaneni. Umuthi wehluka kuphela kumthamo wento esebenzayo (ama-milligram angama-325, amaphilisi ayi-0.5 anconyiwe). Emiphumeleni emibi, isicanucanu kuphela, ukuvusa amandla kokuhlanza, kanye nokuqhuma kwesikhashana esikhumbeni kungabonakala, kepha amathuba okubonakaliswa kwawo aphansi kakhulu (1 ku-100,000).
Kufinyelelwe kumacala alandelayo:
isikhathi sokuzala (kwenqatshelwe ukwamukela kunina),
Imiyalo esetshenzisiwe ikhombisa ukuthi ulandela ngokuqinile uhlelo lokuphuza umuthi. Lokhu kufanele kwenziwe okungenani ihora ngaphambi kokudla noma amahora amabili ngemuva kokudla. Ngaphandle kwalokho, i-azithromycin ephansi ephansi kakhulu izongena egazini.
Izidakamizwa esizoxoxa ngazo kulesi sihloko zihlobene nama-antibacterial agents, okusho ukuthi bayakwazi ukucekela phansi i-pathogenic microflora.
Le mithi elwa namagciwane ithole ukusetshenziswa kwayo hhayi kuphela ekwelashweni kwezifo zohlelo lokuphefumula, kodwa futhi isetshenziswa ngokuphumelelayo kuzo zonke izitho nezinqubo zomzimba lapho ama-pathogen asezinzile.
Kafushane ngokukhetha okulungile kwama-antibiotics
Amanye ama-antibacterial agents abuthakathaka, kanti amanye, ngokungafani nalokhu, anomphumela ophinyiselwe ngokwengeziwe. Ekwelapheni izifo ezithathelwanayo, kunemithetho ethile, noma okubizwa ngokuthi abaphathi (i-oda lakho) lokunquma imithi elwa namagciwane.
Ezenzweni zezingane, ngokomqondo, njengabantu abadala, ukwelashwa kuqala njalo ngama-penicillin: i-Augmentin, i-Amoxiclav, i-Amoxicillin. Ngokuvamile abazali babuza lo mbuzo: "Yimuphi umuthi wokuvimbela amagciwane ongayikhethela ingane, ezosebenza kangcono nangokuphumelelayo?". Kuyaphawuleka ukuqaphela ukuthi udokotela kuphela obandakanyeka ekukhetheni kwama-antibacterial agents.
Umuthi ofanele wazo zonke izidakamizwa ezilwa namagciwane ubhekwa njengokhetho oluhlosiwe lomuthi ngokuya ngemiphumela yesiko lamagciwane ngokuhlangana ne-antibioticogram, lapho kubonakala ngokusobala ukuthi yini imbangela yalesi sifo nokuthi yimiphi imishanguzo amagciwane azwela kuyo. Le ndlela "ingena kwabayishumi abaphezulu."
Iziguli eziningi ziphindaphindeke zabhekana neqiniso lokuthi ngemuva kokuqokwa kokwelashwa ngemithi elwa namagciwane, umphumela awenzekanga noma wawungeneliseki ngokunganaki. Lokhu kwalandelwa ukufakwa okulandelayo kwezidakamizwa lelinye iqembu, futhi imvamisa ukwelashwa okunjalo kube nemiphumela emihle.
Uma sikhuluma nge-pathology yohlelo lokuphefumula, khona-ke izidakamizwa esizicabangela ngezansi zithathwa njengezithandwa kakhulu kulo mkhakha wezokwelapha.
Ukuphendula umbuzo wokukhetha izidakamizwa ezilwa namagciwane phakathi kwe-amoxiclav, augmentin, isifinyezo kanye ne-amoxicillin (okungcono?), Sizobuyekeza kafishane le mithi futhi sithole izici zayo.
I-Amoxicillin (iRussia, iSerbia, neVietnam)
Into esebenzayo ye-Amoxicillin yi-amoxicillin trihydrate. Umuthi ungowama-penicillin e-semisynthetic enobubanzi besenzo. Isebenza kakhulu ngokumelene namagciwane we-aerobic we-gram-positive ne-gram-negative: Akukona kuvezwe imvelo ye-acid yethrafikhi yesisu futhi ingena ngokushesha odongeni lwamathumbu.
Iningi lamagciwane likhiqiza i-penicillinase, enomphumela olimaza i-Amoxicillin, ngenxa yalokho ama -organicorganis ayamelana naleli gciwane.
Umuthi uyatholakala kumaphilisi, amaphilisi kanye ne-powder yokumiswa . Zonke izinhlobo zenzelwe ukusetshenziswa kwangaphakathi, i-Amoxicillin yomjovo ayisetshenziswa.
I-Amoxicillin isetshenziswa kusukela ezinsukwini zokuqala zempilo yengane, noma ezinganeni ngaphambi kwesikhathi. Ukubala umuthi ezigulini ezincane kakhulu kususelwa ku-20 mg / kg yesisindo sengane.Umthamo kanye nemvamisa yokuphatha izingane ezisanda kuzalwa kukhethwe ngabakwa-neonatologists.
Izinkomba eziphambili zokusebenzisa i-Amoxicillin
Uhlu lwezinkomba likhulu impela:
I-Amoxicillin ayithathwanga kumacala alandelayo:
ukungahambi kahle kwama-penicillin nama-cephalosporins,
ukungabekezelelani kwenye yezingxenye ze-Amoxicillin,
Izifo ezinzima zesisu,
Isifuba Somoya, ikakhulukazi
ukucaphuka, ukukhulelwa (ukwephulwa okuhlobene - uma kunesidingo, i-Amoxicillin inqunyelwe),
Ukuthatha umuthi kwesinye isikhathi kuhambisana nokusabela okungekuhle:
ukwethuka kwe-anaphylactic (akuvamile kakhulu),
umuthi unciphisa umphumela wokuvimbela inzalo.
Intengo ye-Amoxicillin kwamaphilisi ama-500 mg ama-20 izingcezu (iRussia) - ama-ruble angama-80, izindleko zamaphilisi angama-500 mg uNombolo 20 (Russia) - ama-ruble angama-52, izinduku zokumiswa komlomo okungu-250 mg (Serbia) kulinganiselwa cishe kuma-ruble angama-95.
Umuthi ungowuchungechunge lwe-penicillin, futhi usebenza ngokumelene nenani elikhulu lamagciwane (ngokwemiyalo yasekuqaleni yangempela). Izithako ezisebenzayo - i-amoxicillin trihydrate ne-clavulanic acid (potasium clavulanate).
I-Amoxiclav itholakala kwifomu lethebhulethi, i-powder yokulungiselela ukumiswa kokulashwa (ngomlomo) kanye nesisombululo somjovo. Amacwecwe asetshenziswa ngemuva kweminyaka eyi-12,futhi lapho isisindo sesiguli okungenani singama-40 kg. I-Powder (ukumiswa) iyaziwa kakhulu ezinganeni, futhi ivunyelwe kusukela ezinsukwini zokuqala zempilo yengane.
Izinkomba eziphambili zokusebenzisa i-Amoxiclav
I-antibiotic isetshenziswa kulezi zinqubo ezilandelayo zokutheleleka:
i-sinusitis (esibuhlungu nesingamahlalakhona),
i-sinusitis (ICD-10 - ngezigaba),
isikhumba, i-gynecological, genitourinary, bone kanye nezinye izifo.
Umuthi akufanele usetshenziswe emacaleni alandelayo:
ukungahambi kahle komzimba kuma-beta-lactam antibiotic (cephalosporins, penicillin, abanye),
i-mononucleosis nangesikhathi sokuxilongwa kwalesi sifo,
i-cholestatic jaundice nokusabela kwesibindi ku-Amoxiclav,
ukungabekezeleli kwenye yezingxenye ze-Amoxiclav,
izifo ezinzima zesibindi nezinso,
i-pseudomembranous colitis (ukwephulwa okuhlobene, okunqunyelwe ngokuqapha).
Ukukhulelwa nokukhulelwa - isinqumo ngokuqokwa kwe-Amoxiclav senziwa kuphela ngokuya ngezinkomba eziqinile.
Emuva kokuphuza umuthi, imiphumela emibi imvamisa ivezwa kancane. Ezimweni eziningi, i-Amoxiclav ibekezelelwa kahle yiziguli, kepha kungenzeka ukuthi imiphumela emibi ingabandakanywa, imi ngale ndlela elandelayo:
ukugabha (akuvamile kakhulu)
ukwephulwa kwezibalo zegazi (i-thrombocytopenia, ukwanda kokuhlolwa kwesibindi - i-ALT, AST, i-eosinophilia, abanye),
Intengo yamathebulethi e-Amoxiclav I-250 mg (izingcezu eziyi-15) ngama-ruble angama-230, izindleko zikafulawa wokumiswa kwama-250 mg ngama-ruble angama-280.
Ividiyo: Udokotela ukhetha kanjani i-antibiotic
Izincomo zomtholampilo (umthetho olandelwayo wokwelashwa) wokuhlinzekela ukunakekelwa kwezokwelapha kwezingane ezine-tonsillitis (acute streptococcal tonillitis), FSBI NIIDI FMBA RUSSIA, GBOU VPO KrasGMU im. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky Ministry of Health of the Russian Federation, MBUZ GDKB 1. (Krasnoyarsk), Inhlangano Yomphakathi "I-Eurasian Society Yezifo Ezithathelwanayo", Inhlangano Yomphakathi "Inhlangano Yezifo Ezifo Ezithathelwanayo zaseSt. Petersburg kanye neLeningrad Region"
Shcherbakova M.Yu., Belov B.S. I-A-Streptococcal tonillitis: izici zesimanje - GOU VPO RSMU Roszdrav, GU Institute of Rheumatology RAMS, Moscow.
Esimweni esejwayelekile, nge-angina, i-Augmentin imvamisa kakhulu ukunqunyelwa ukwedlula iSumamed. Into esebenzayo ye-Augmentin yi-amoxicillin, i-antibiotic yomugqa wokuqala ...
Kulezi zidakamizwa ezimbili - i-Flemoxin Solutab ne-Sumamed - nge-angina, ngokuvamile kunconywa ukukhetha i-Flemoxin Solutab. Isithako sayo esisebenzayo ...
I-Sumamed ne-Suprax ene-angina ayalingana. Banikeza umphumela ofanayo, babe nokuphepha okufanayo. Udinga ukukhetha phakathi kwabo, wazi ...
I-Amoxicillin noma i-Amoxiclav - okungcono ukukhetha?
Zombili lezi zidakamizwa zingechungechunge lwe-penicillin futhi zine-amoxicillin ekwakhekeni kwazo, kodwa i-Amoxiclav ihlanganiswa ne-clavulanic acid, ngenxa yokuthi yona ikhulisa kakhulu ukubonakala kwesenzo. Ngakho-ke, i-Amoxiclav iboniswa kwezifo ezinzima kakhulu. I-Amoxicillin “ayinazo izibhamu” phambi kwe-beta-lactomas, futhi lokhu kuyabuya.
Ukuphela kwekhono le-amoxicillin kuyizindleko zayo, kushibhile kakhulu kune-Amoxiclav.
Lapho sikhetha la mathuluzi amabili, singaphetha ngokuthi: kungcono ukukhokhela umuthi onokwethenjelwa kakhulu kunalokho ukubheka ama-analogues asazobiza kakhulu. Yize kungelona iqiniso ukuthi i-Amoxicillin iphelele futhi izoyixazulula inkinga ngama-microorganisms e-pathogenic, futhi yize kubiza kakhulu.
I-Augmentin iyi-analogue yesakhiwo ye-Amoxiclav. Zifana ngokuphelele ekwakhiweni, izinkomba, ama-contraindication namanye amapharamitha. Ngakho-ke, ukuphendula umbuzo obuzwa njalo: “Yini engcono - i-Augmentin noma i-Amoxiclav?” Akunzima.
Le mithi elwa namagciwane ihluke kumakhiqizi kanye nokuhamba kancane ngentengo. Amathebulethi abiza cishe okufanayo, futhi i-powder yokulungiselela ukumiswa okuvela ku-Augmentin ishibhile kancane - ama-ruble ayi-150.
Abanye odokotela bakhetha ukusebenzisa i-Augmentin ezinganeni kaningi, kanti abanye abaliboni iphuzu uma liqhathaniswa. Ukuze ungalingisi ubuchopho bakho, faka ukukhetha kukamuthi nokwelashwa kudokotela.
Yimaphi ama-antibiotic okufanele ngiwaphuze nge-angina?
Amagciwane we-Streptococcal abangela i-tonsillitis azwela kakhulu i-penicillin, ngakho-ke udokotela uncoma kakhulu izidakamizwa ezinjalo.
I-Amoxicillin isidakamizwa seqembu le-penicillin. Inzuzo yesidakamizwa ukuthi itholakala ngezindlela ezahlukahlukene: amaphilisi, isiraphu, amaphilisi. Lokhu kulula kakhulu ekwelapheni izingane ezincane, kwesinye isikhathi okunzima kakhulu ukuzilolonga noma ukubancenga ukuba bathathe iphilisi.
I-Amoxiclav iyindlela ye-amoxicillin equkethe i-clavulanic acid, ekhulisa umphumela womuthi.
Ezimweni lapho kukhona ukungabekezelelani i-penicillin (i-allergy) noma ama-bacterium angazwisisi i-penicillin, imishanguzo yeqembu le-macrolide imvamisa ibekiwe. Ama-antibiotic aleli qembu asebenza kakhulu, anobuthi obuphansi, abhubhisa inani elikhulu lama-microorganisms. Umuthi wokuqala kuleli qembu yi-erythromycin, kepha manje izidakamizwa zibizwa ngokuthi, i-zitrolide, i-chemomycin, ezaziwa njenge-analogues ye-erythromycin.
Uma kungekho ukungahambisani ne-penicillin, khona-ke kungcono ukusebenzisa izidakamizwa zaleli qembu elithile, ngoba zilimaza kakhulu umzimba. I-Amoxiclav, i-amoxicillin ikhombisa imiphumela emihle.
I-Amoxiclav yisidakamizwa esisebenza kahle kunazo zonke, ngoba siyi-antibiotic yesizukulwane esisha. Kodwa-ke, kwezinye izimo akunakwenzeka ukusebenzisa i-penicillin (i-ejenti ebangelwa yi-angina iyamelana nale nto, i-allergic ne-penicillin, njll.), Ngakho-ke, amanye ama-anti-spectrum ama-antibiotic asetshenziswa: i-clacid, i-lendacin, ihlanganisiwe, i-cephalexin, i-siflox, i-erythromycin, i-cefazolin.
Uma ungaqali ukwelashwa kwe-antibiotic kwe-angina, kungaholela ezinkingeni ezinkulu (i-otitis media, glomerulonephritis, sinusitis).
Ama-antibiotic ama-angina athuthukisa kakhulu isimo sesiguli emahoreni okuqala ngemuva kokuphathwa. Ekushiseni okuphezulu kakhulu, futhi udinga ukuthatha ama-antipyretic, ama-painkillers, azosiza ukudambisa ikhanda, ubuthakathaka, njll. Akunconywa ukwehlisa izidakamizwa ngaphansi kwama-degree angama-38 ngezidakamizwa, ngoba ngalesi sikhathi umzimba ukhiqiza kakhulu amasosha omzimba ukulwa nesifo.
Ama-penicillin angenye yezindlela zokuqala zokulwa namagciwane abantu abaqala ukuzisebenzisa. Ezikhathini zanamuhla, amanye amalungiselelo e-penicillin asevele aphelelwa amandla ngenxa yokumelana kwamagciwane akhiqizelwa wona, kepha izinzuzo ezibalulekile eziwahlukanisa kahle kwamanye ama-antibiotic akhuthaza ochwepheshe ukuthi bakhe izidakamizwa ezintsha ezisebenzisa i-penicillin.
Izinzuzo zale mithi elwa namagciwane zibandakanya ukulimala kwazo okuncane emzimbeni, isibuko esikhulu sezenzo, kanye nomsebenzi ophakeme we-antibacterial. Ukuphendula okuhlukile kwe-penicillin kwenzeka kaningi kakhulu kunokwelashwa neminye imishanguzo elwa namagciwane. Imvamisa, imiphumela emibi ibonakaliswa ngendlela yokwaliwa, ukuphazamiseka kwe-microflora yamathumbu, kwesinye isikhathi ukuvuvukala kwenzeka endaweni yomjovo. I-penicillin ayinakusetshenziswa ngabantu abanesifiso sokusabela okuhlukahlukene komzimba, abanezifo ze-asthma ze-bronchial.
Izidakamizwa eziningi zeqembu le-penicillin zisetshenziselwa imijovo kuphela, ngoba imvelo ene-acid esiswini ibabhubhisa kakhulu, futhi baphelelwa wukusebenza kwabo, ikakhulukazi izidakamizwa ze-biosynthetic (ezikhiqizwe yi-biosynthesis). Okuhlukile yi-phenoxyphenicillin kuphela, emelana nemvelo ene-acidic futhi engathathwa ngomlomo.
Ukulungiswa kwePenicillin kufanele kuhlanganiswe nokuqapha namanye ama-ejenti, kubekwa emgqeni wokuwathatha ngasikhathi sinye namanye ama-antibiotic. Ama-penicillin anqunyelwe ukwelashwa kwezifo ezibangelwa amagciwane anegram (i-staphylococci, i-streptococci, i-pneumococci).
Umuthi okhethwe kahle ungadambisa isimo sesiguli futhi uqede ngokuphelele ukutheleleka emzimbeni.
Ukwelashwa kwe-tonsillitis, i-antibiotic ye-penicillin eyenziwe nge-synthesic enomphumela we-bactericidal isetshenziswa kabanzi. I-Flemoxin salutab ilwa ngempumelelo ne-staphylococci, okuholela ekuthuthukisweni kwe-tonsillitis. Into esebenzayo yesidakamizwa yi-amoxicillin. I-Flemoxin salutab isetshenziswa zombili ze-angina nezinye izifo ezithathelwanayo nezingena ngamandla kohlelo lokuphefumula, uhlelo lwezitho zangasese, kanye nezinsimbi zesikhumba ezibangelwa ama-microorganisms azwela umuthi.
I-Flemoxin salutab inokumelana okuhle kwe-acid, umthamo womuthi unqunywe ngudokotela ngokwahlukana, ngokusezingeni lobunzima balesi sifo. Imvamisa, ukuthola izifo ezithambile ezilinganiselwe, inkambo yokwelashwa ihlala izinsuku ezingama-5- 10, ezimweni ezinzima kakhulu ezinsukwini eziyi-10- 14. Umuthi kufanele uthathwe ngisho nangemva kokunyamalala kwezibonakaliso ezinzima zesifo (izinga lokushisa, umphimbo obuhlungu), uma kungenjalo, ama-microorganisms azothuthukisa ukumelana nomuthi ngokushesha, okuzophazamisa ukwelashwa ngokuzayo. Uma, lapho uthatha i-flemoxin, akukho ukuthuthuka ezinsukwini zokuqala ezi-3 kuya kwezi-4, kuyadingeka ukuyibuyisela ngenye i-antibiotic.
I-Flemoxin salutab icutshwe ne-mononucleosis esithathelwanayo, i-leukemia, ukungabekezelelani kwezinye izingxenye zomuthi.
Ukusebenzisa umuthi akuvami ukuthi kube nemiphumela emibi (isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, komzimba).
I-Augmentin (i-amooticillin-clavulanate) ingama-antibacterial agents asebenzayo impela. Umuthi uvame ukusetshenziselwa ukwelapha i-tonsillitis ebuntwaneni.Umuthi unezinto ezimbili ezisebenzayo ngasikhathi sinye - i-amoxicillin ne-clavulanic acid, ehlukanisa kahle nabanye.
I-Amoxicillin iyi-anti-synthetic antibiotic yeqembu le-penicillin, enobubanzi besenzo bokulwa nenani elikhulu lamagciwane angena gram kanye nama-gram-negative. I-Clavulanic acid inesakhiwo esifana ne-penicillin, iqeda ngempumelelo ama-enzyme e-beta-lactamase akhiqizwa ngamagciwane we-pathogenic ukuthuthukisa ukumelana nemithi elwa namagciwane. Kungenxa yale asidi ukuthi i-amooticillin ayiboli ngaphansi kwesenzo sama-enzyme, enwebisa umphumela wayo enanini elikhulu lamagciwane ahlangabezana ne-amoxicillin nezinye izidakamizwa zeqembu le-penicillin.
I-Augmentin inazo zonke izakhiwo ze-antibiotic ezinomphumela we-bactericidal kuma-microorganisms amaningi, futhi ikhipha umphumela we-beta-lactamases.
Umuthi uyatholakala ngesimo samaphilisi, imijovo, ukumiswa. Umthamo ekwelashweni kwezingane usungulwa ngokuya ngeminyaka, isisindo sengane.
Amalungiselelo avela kuleli qembu, njenge-cephalexin, alula ngoba angathathwa ngaphandle kokudla. Isiguli esikhulile sinconywa ukuba singadli ngaphezu kwesi-2 g somuthi ngosuku. Umthamo kufanele uhlukaniswe ngemithamo eminingana (imvamisa 3-4). Ezimweni ezinzima zesifo, umthamo unyuka ufike ku-4 g ngosuku. Ebuntwaneni, umthamo uncike kwisisindo somzimba futhi ungama-25-50 mg ngekhilogremu, umuthi kufanele futhi uhlukaniswe kabili. Uma lesi sifo sishubile, isilinganiso sonyuswa saya ku-100 mg.
Imithi elwa namagciwane asendaweni ye-tonillitis
I-Angina yisifo esithathelanayo esivamile lapho kunokuvuvukala okuqinile kwendawo ku-pharynx. Ukusetshenziswa kwekhambi lendawo ekwelapheni isifo esivamile ngeke kuphumelele. Ukwelashwa kwe-angina kufanele kwenzeke ngezinga elijwayelekile: ukuphumula, ukuphuza kakhulu, ama-antibiotic. Ukwelashwa kwasendaweni (ukufafaza umphimbo ngama-aerosols, amaphilisi afunekayo akhethekile, ama-rinses, njll) kufanele kufakwe ekwelashweni okujwayelekile ukufeza umphumela omkhulu wokwelashwa.
Ingabe i-bioparox isetshenziswa?
I-Bioparox ekwelapheni i-angina ingasetshenziswa kuphela ngokuhambisana nokwelashwa okujwayelekile. Ama-antibacterial agents ekuqaleni kwesifo (ngaphambi kokwakhiwa kobandlululo) okuyisiqondiso sokuqala nesibalulekile ekwelashweni. Imvamisa, i-bioparox ayisetshenziswa kakhulu ekwelapheni i-angina, ngoba asikho isidingo sokwelashwa okungeziwe ngokubhekene nesizinda sokwelashwa okujwayelekile.
I-Bioparox isetshenziselwa ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kwe-tonsillitis engapheli (ukuvuvukala kwe-tonsil). Umuthi awusetshenziswa kunezinsuku eziyi-10. Njengokuqokwa kwezinye izidakamizwa zokulwa namagciwane, kuyadingeka ukukhomba ukutholakala kwamagciwane kuwo. Ngaphandle kokuhlaziywa okunjalo, ukwelashwa kwezifo ezinenqubo yokuvuvukala kungaholela emiphumeleni emibi: ukubhujiswa okuphelele kwama-microflora anenzuzo ku-pharynx, okuthikame ukukhula kwegciwane le-pathogenic, emva kwalokho ama-microorganisms aqala ukwanda ngamandla amaningi, okuzoholela ekuvuvukeni okukhulu.
Ungayisebenzisa kanjani i-bioparox ekwelapheni i-tonsillitis engamahlalakhona?
I-Bioparox ayikwazi ukusetshenziswa ngokungalawulwa. Uchwepheshe kuphela ongancoma umuthi ukwelashwa. I-Bioparox isiza kahle ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kwe-tonsillitis engapheli (ukuvuvukala kwamathani).
Imvamisa, kulungiselelwe isikhathi esisodwa kubantu abadala njalo emahoreni amane, ebuntwaneni - njalo emahoreni ayisithupha. Iseshini isho ukuphefumula ngomlomo, okuzodinga i-nozzle ekhethekile egqoke ebhodleleni, etholakala emgodini womlomo oseduze namathoni atshisiwe. Ngemuva kwalokho, kwenziwa izinkinobho ezimbili zokunisela ithililitha elilodwa, bese kwenziwa izinkinobho ezimbili komunye. Ngemuva kokusetshenziswa, i-nozzle kufanele igezwe ngamanzi ampomponkayo.
Imithi elwa namagciwane entanjeni ebuhlungu ezinganeni
Ama-antibiotic ama-angina ezinganeni kufanele anqunywe ngokuya ngokuthi yini imbangela yalesi sifo: igciwane noma i-bacterium ye-streptococcus. Njengomthetho, lapho ukuhlolwa okubonakalayo kungafani umehluko obonakalayo, amabhaktheriya e-streptococcus angabonakala kuphela ngokuhlolwa okukhethekile (isiko le-bacteriological).
Kwezinye izimo, ukwelashwa okulwa namagciwane kungasetshenziswa ezigulini ezincane, noma kunjalo, umphumela omuhle awubonwa njalo ngale ndlela yokwelashwa. Okokuqala, imithi elwa namagciwane ngesikhathi sokubhujiswa kwaleli gciwane iba nomthelela omubi emasosheni omzimba angahlelwanga. Ngomphimbo obuhlungu obangelwa ukutheleleka ngegciwane, umzimba uyakwazi ukubhekana nakho, kuyadingeka kuphela ukunikeza ingane ukuphumula okugcwele, isiphuzo esiningi, umsoco wevithamini ophelele. Nge-streptococcal angina, okungenzeka kakhulu, kuzodingeka uthathe inkambiso yama-antigciwane, adingekayo ukuvimba ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinkulu kakhulu.
Funda kabanzi ngokusetshenziswa kwezidambisigciwane ezinganeni lapha.
Ukwelashwa kwe-tonsillitis kubantu abadala
Abantu abaningi bayakungabaza imithi elwa namagciwane, bekholelwa ukuthi ukulimaza umzimba kubo kudlula kakhulu izinzuzo. Lokhu kwenza umqondo othile, ngoba ama-antibiotics awabhubhisi ama-pathogens kuphela, futhi abhubhisa i-microflora ewusizo emzimbeni wethu - ngenxa yalokho, i-dysbiosis iyakhula. Futhi, ukusetshenziswa kwama-antibiotics kungavusa ukusabela okukhulu komzimba.
Kodwa, ngeshwa, ezinye izifo azikwazi ukwelapheka ngaphandle kokusebenzisa imishanguzo elwa namagciwane. Imithi elwa namagciwane kuma-angina, ikakhulukazi uma kukhona ama-pustule emathinini, kuphakame izinga lokushisa eliphakeme kakhulu, nobuthakathaka obujwayelekile sekuqalile ngokumelene nesizinda sokudakwa komzimba, kumane kungenakugwenywa. Kepha ama-antibiotic kufanele athathwe kahle ukuze anciphise umphumela ongaba khona. Inkambo ejwayelekile yokwelashwa kwama-antibiotic cishe izinsuku ezingama-7. Kepha abantu abaningi bayayeka ukuthatha lo muthi ngokushesha ngemuva kokunyamalala kwezimpawu ezinzima ukuze banciphise imiphumela emibi emzimbeni ekuthatheni imishanguzo. Lesi sinqumo asilona iqiniso futhi singadala izinkinga ezinkulu. Ngisho nangemva kokuba izimpawu zesifo sezinyamalele (umphimbo obuhlungu, ubuthakathaka, umkhuhlane), ukutheleleka kuyaqhubeka "ukuhlala" emzimbeni. Uma uyeka ukuthatha lo muthi wokulwa namagciwane, kungenzeka ukukhula kabusha kwesifo, okuzodinga ukwelashwa okungathi sína, ngoba ama-microorganisms asevele esungule ukumelana nohlobo oluthile lwe-antibiotic. U-Angina uvame ukuxinwa yisifo senhliziyo kanye ne-rheumatism, ngoba amagciwane awasabalali nje emthonjeni oyinhloko wokuvuvukala - umphimbo, kepha emzimbeni wonke ungena kuzo zonke izitho zomzimba.
Lapho uthatha imishanguzo yokulwa namagciwane, udinga ukunamathela esimisweni esithile, ngaphandle kwalokho kusongela ukuthuthukisa inqubo yokuvuvukala kanzima. Kulokhu, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuzodingeka, umthelela omubi emzimbeni wazo ozoqina ngokwengeziwe.
Ukuze unciphise imiphumela emibi lapho uthatha ama-antibiotics, udinga ukuthatha izidakamizwa ezikhethekile kusukela ezinsukwini zokuqala zokwelashwa ukuze ubuyisele i-microflora yamathumbu, kanye nesibindi.
I-Sumamed akuyona eyama-penicillin, njengawo wonke ama-antibiotic wangaphambilini acatshangelwe, kepha ngeka-macrolides (azalide). Into esebenzayo yi-azithromycin dihydrate. Umuthi ukhiqizwa ngendlela yamaphilisi, amaphilisi kanye ne-granular powder lapho kulungiswa ukumiswa okunambitheka ngokunambitheka kwebhanana ne-cherry.
Umuthi unomphumela obizwa ngokuthi yi-antimicrobial ngenxa yokukwazi ukucindezela ukuhlanganiswa kwamaprotheni eseli. Ukungena ngaphakathi kwe-intracellularly, i-Sumamed ibhubhisa ngokushesha izimbali zezitshalo. Inomsebenzi maqondana nohla olukhulu lwamagciwane.
Le antibiotic ibekwa kahle kakhulu ngemuva kwe-antibioticogram, ngenxa yokuthi kunenqwaba yamagciwane asevele amelana nayo, isibonelo, iStaphylococcus spp. noma amaBacteroides fragilis.
Umuthi ungasetjenziswa ezimweni lapho izifo ezilandelako zithinta i-Sumamed, okungukuthi:
Izifo zazo zonke izingxenye zohlelo lokuphefumula:
Izifo ezithathelwanayo zesikhumba:
isifo sezinso esiyinkimbinkimbi ngamagciwane,
isifo sokuqaqamba kwamalunga.
Ngabe iSumamed ayisetshenziswa nini?
Izici ezilandelayo zingafani nokuphuza umuthi:
ukungabekezelelani ngakunye ekwakhekeni komkhiqizo,
ukuhluleka kwezinso nezinso,
iminyaka yezingane yezindlela ezahlukahlukene zomuthi incishisiwe (amaphilisi - aze afike eminyakeni emi-3, amaphilisi - ukuya kufinyelela eminyakeni eyishumi nambili, inqobo nje uma isisindo somzimba singekho ngaphansi kwama-45 kg, ngokumiswa - kufinyelela ezinyangeni ezi-6),
ayiphathwanga nge-ergotamine (alkoloid) ne-dihydroergotamine (alpha-blocker).
izifo zenhliziyo ezinzima organic organic.
Ngokuphikisana nesizinda sokuthatha iSumamed, imiphumela elandelayo elandelayo iyenzeka:
ukwephula iphunga, ukubona, ukuzwa.
Into ethokozisa kakhulu ukuthi odokotela babheka ukuthi iSumamed iyisidakamizwa esisebenza kakhulu futhi esiphephile, naphezu kohlu lwayo olukhulu lwe "imiphumela emibi" (bheka imiyalo yasekuqaleni).
Ekusebenzeni, ikhambi lisebenza ngokuphelele, ngisho nesifo esinjenge-pleurisy eyomile sidlula ngezinsuku ezintathu. Izifundo ezimfishane zokwelapha, njengomthetho, azihlanganisi imiphumela emibi.
Intengo ku-Sumamed kuya ngefomu nomuthi womuthi, ngokwesibonelo, amaphilisi (250 mg) No. 6 kubiza ama-ruble angama-460, amaphilisi (500 mg) No. 3 - 430 ruble, i-powder yokumiswa - ama-ruble angama-200.
Le mishanguzo ihluke ngokuphelele, inge yamaqembu ahlukene, ihlukile entweni esemqoka esebenzayo. I-Amoxiclav ivunyelwe ukusetshenziselwa izinyanga zokuqala zokuphila, iSumamed - kusuka ezinyangeni eziyi-6. I-Amoxiclav ishibhile, kepha iSumamed inezifundo ezimfushane zokwelashwa. Imvamisa imiselwe izinsuku ezi-3, bese ama-penicillin ethatha isonto. Ijubane lokuthathwa kweSumamed kunciphisa isikhathi sesifundo.
Akunakwenzeka ukusho ngokusobala ukuthi yisiphi isidakamizwa esingcono, sonke ngokwahlukana. Umuthi ngamunye unezinzuzo zawo nobubi bawo, futhi isipiliyoni udokotela kuphela azosiza ukuphakamisa ukukhetha okulungile.
Isikhathi kanye nohlobo lokwelashwa lwezinhlobo ezahlukahlukene ze-tonsillitis
Inkambo yokwelashwa ngemithi elwa namagciwane i-drug incike kulo muthi, isigaba sesifo, ubulukhuni bokwenza le nqubo, isimo sokungavikeleki komuntu, njll. Inkambo ephakathi yokwamukelwa yizinsuku eziyishumi.
Ukuze kuthambe iminjunju kobuhlungu obulinganiselayo, kunconywa ama-antibiotic izinsuku ezingama-5-7. Ezimweni ezinzima kakhulu, kunconywa ukuqhubeka nokwelashwa kuze kufike izinsuku eziyi-10-14.
Ukwelashwa ngama-antibiotic akufanele kumiswe ngemuva kokuthi isimo sesingcono, izinga lokushisa selinciphile, nomphimbo obuhlungu usuhambile. Kubaluleke kakhulu ukuthola inkambo ephelele yokwelashwa ngamakhambi ukuze ukutheleleka emzimbeni kuqedwe ngokuphelele.
Lokhu kuyadingeka, okokuqala, ukuvikela ukuqubuka kwesifo. Nge-angina engelashwa, kukhona ubungozi benkambiso yokuphindaphindeka yokuvuvukala emzimbeni, kepha ama-bacterium angama-pathogenic kuleli cala azovele aqhamuke nokumelana neqembu elithile lemithi elwa namagciwane, kanti nokushintshwa kwezidakamizwa nenkambo yesibili yokwelashwa kuzodingeka. Futhi, i-angina ingaxakaniswa yizifo zenhliziyo ezinzima, i-rheumatism.
Kunoma ikuphi, udinga ukuthatha umuthi kakhulu njengoba udokotela ebekiwe.Awukwazi ukuguqula umthamo ngokwakho, kanye nesikhathi sokwelashwa.
I-Angina ingavela kunoma yimuphi ubudala, imvamisa i-amygdala ithinteka kakhulu kunenye. Uma umphimbo obuhlungu ungalashwa, ungangena efomini elihlanzayo futhi ukhungathekiswa ubunzima bezinkinga zenhliziyo.
Ngomphimbo obuhlungu besisu, kuvela umunyu obuhlungu, oqina ngokuqhubeka kwesikhathi, ukugwinya kunzima, izinga lokushisa liyenyuka (ngesinye isikhathi liye kumamaki aphezulu kakhulu). Amathoni aba bomvu okhanyayo, ane-whitish purulent foci. Ama-submandibular lymph node nawo ayavuvukala.
Ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kuhlanganisa nokuqokwa kwama-antiiniki ama-angina, athola ifomu le-purulent. Imithi ebekiwe eqenjini lama-penicillin, i-cephalosporins.
Ama-ejenti aphumelela kakhulu ngokumelene ne-causative agents of tonsillitis (iqembu A streptococci) angamalungiselelo e-penicillin, okufanele athathwe izinsuku eziyi-10. Nge-purill tonillitis, amanye amalungiselelo e-penicillin angasetshenziswa, njenge-augmentin, azithromycin, ampicillin.
Okususwayo okwenziwe nge-penicillin yi-amoxicillin yezidakamizwa. Akubhubhisi ama-bacteria, kepha kumisa ukukhula kwawo, kucekele phansi izindonga zeseli.
Ama-antibiotic eqembu le-cephalosporin afana ngokwakhiwa kwamakhemikhali kumalungiselelo e-penicillin. I-cephalexin antibiotic ivimbela ukwakheka kodonga lweseli, okudingekayo ekusindeni kwamagciwane, okuholela ekugcineni ekufeni kwawo.
I-Erythromycin ne-tetracycline zisetshenziselwa uma kuvela ukungalingani kwe-penicillin kanye nokuphuma kwayo. I-Erythromycin iyi-antibiotic engabonakali ebanzi esebenza ngempumelelo ngokumelene namagciwane amaningi. Ifana ne-penicillin emisebenzini ye-antibacterial, ngakho-ke kungenye indlela enhle yabantu abane-penicillin yokubekezelela.
I-Tetracycline iphazamisa ukwakheka kwamaprotheni, okuthintela ukukhula kwamagciwane. Lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukubekezelela i-penicillin ukwelapha izifo eziningi ezibangelwa amagciwane.
Funda i-athikili ephelele ngamagama nangendlela yokusebenzisa ama-antibhicapha we-purulent tonillitis lapha.
I-Follicular tonillitis ithinta ama-allic follicles, ngaphandle ukwazi ukubona ukwanda kwawo okunamandla, ukuvuvukala. Ama-follicles ama-purulent ayabonakala, angahle abe mhlophe noma aphuzi aphuzi (kuya ngokuthi isifo sikhona isikhathi esingakanani). Ubukhulu be-abscess buncane - cishe 1 - 2 mm. Ngemuva kokudlula emalungeni, kuvela inhlanganisela emhlophe emathangeni.
Umenzeli we-causative walesi sifo uvame kakhulu ukutheleleka nge-streptococcal noma i-pneumococcal. Kuvela isifo uma kwehla ukuvikelwa komzimba, i-hypothermia, ukutheleleka emgodleni womlomo. I-Follicular pain pain ingagula umuntu omdala nengane, kepha ebuntwaneni, lesi sifo sivela kaningi futhi sinezici ezithile. Ngokuyinhloko, lesi sifo sikhula ngenkathi yamakhaza - ekwindla-ebusika.
Ekwelapheni i-follicular tonillitis, akudingekile nje kuphela ukubhubhisa ukutheleleka emzimbeni, kodwa futhi nokususa ukudakwa. Ngezimpawu zokuqala zesifo, kufanele ubheke ukuphumula kombhede futhi uphuze uketshezi oluningi. Ukuze ungacasuli umphimbo obuhlungu, udinga ukudla ikakhulukazi okuwuketshezi, ngezingxenye ezincane.
Umkhakha wanamuhla wemithi unikezela ngemithi ehlukahlukene yokwelashwa kwezifo ezithathelanayo kuzo zombili izingane ezindala nezingane.
Izidakamizwa ezivame kakhulu ekwelapheni i-angina yi-Erythromycin, Flemoxin, Sumamed, Ampicillin nezinye. Inkambo yokwelashwa ngama-antibiotic ingaba yizinsuku eziyi-10. Ungasebenzisa futhi izidakamizwa zasendaweni ukudambisa umphimbo obuhlungu: i-orasept, i-pharyngo-spray, njll. Uma unezihlakala zesikhumba (i-allergies), ungathatha ama-antihistamines (suprastin, diazolin, loratidine, njll.). Futhi, ungakhohlwa ukuvikela amathumbu akho emiphumeleni eyingozi yama-antibiotics.Njengomthetho, ukwenza i-microflora ibe nse ngokwejwayelekile, kunconywa ukuthatha i-Linex.
ILacunar angina isifo esisabalele namuhla. Ngokuyisisekelo, lesi sifo sithinta ipheshana lokuphefumula elingaphezulu, kepha uma amathayile engathinteki, khona-ke inqubo yokuvuvukala iqonde ngqo emphinjeni. Uma kungekho amathoni (asuswe ngokuhlinzwa) noma alimala, i-lacunar tonillitis ngesikhathi esifushane inika inkinga enkulu - inyumoniya.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinobubanzi besenzo kumele kuqale ngokubonakala kwezimpawu zokuqala zalesi sifo. Uma ukuhlwanyela ukuthikamezeka kwe-microflora ye-pathogenic kuya kuma-antibiotics, inqubo yokwelashwa izosebenza kakhulu. Umzimba womuntu unganqoba izimpawu eziyinhloko zalesi sifo ngeviki, kepha ukutheleleka kuzohlala ngaphakathi, futhi isikhathi ngasinye kunezici ezithandekayo zangaphandle (ukuncipha kokugomela, i-hypothermia, njll.) Kuzovusa i-angina. Ngenxa yalokhu, izifo ezivama ukuholela ezinkingeni ezinkulu - i-rheumatism, ukukhubazeka. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhetha inkambo ephumelelayo yokwelashwa, okuzosiza ekuqedeni izinkinga zempilo ezingaba khona.
Ekuqaleni kwalesi sifo, kunconywa ukuthatha ama-antibhiksiki nge-wide spectrum yesenzo se-cephalosporins, sulfonamides. Isibonelo, ezibonakalweni zokuqala zalesi sifo, kuhle ukuthatha ithebhulethi ebunjiwe ngosuku noma ithebhulethi eyodwa ye-ciprolet kabili ngosuku. Kuyadingeka futhi ukuthatha ama-antihistamines (suprastin, diazolin, pipolfen) ukuze unciphise ukuvuvukala kwamathani bese wenza ukugwinya.
Ukuze uqinise amasosha omzimba, uvithamini C ubekelwa ku-1 g ngosuku. Umuthi omuhle we-angina yi-ascorutin, equkethe i-rutin ne-ascorbic acid. Lesi sidakamizwa asikhulisi kuphela ukumelana nokutheleleka komzimba, kodwa futhi siqinisa nezindonga zemithambo yegazi, ezovikela i-DIC.
Umphimbo obuhlungu we-Herpetic
Umphimbo we-Herpetic sore yisifo esinagciwane esibuthaka kakhulu esibangelwa amagciwane amancane omndeni we-Enterovirus, uCoxsackie. Ekuqaleni kwalesi sifo, kuphakama amazinga okushisa aphakeme (aze afike ku-40 degrees), umphimbo obuhlungu, ukuhlangana kwamathambo, ikhanda. Kwesinye isikhathi kuvela ukuhlanza nohudo. Ama-vesicles amancane avela palate ethambile, amathayili, odongeni lwangaphambilini lwangaphansi, oluvuleka ngezinsuku ezimbalwa futhi kuqala ukululama.
Ama-antibiotic ama-angina aleli fomu awasebenzi. Ukwelashwa kuhloselwe kakhulu ukudambisa izimpawu zesifo. Imishanguzo ejwayelekile ebekiwe, izidakamizwa ze-antipyretic, ukuphumula nokuphuza kakhulu.
Catarrhal umphimbo obuhlungu
I-Catarrhal tonillitis ivame ukwenzeka lapho yenza buthaka izivikelo zomzimba (ukuntuleka kwamavithamini, i-hypothermia, njll). Imvamisa, lesi sifo sikhula ngasekupheleni kobusika, ekuqaleni kwentwasahlobo. Futhi, umphimbo wesihlungu se-catarrhal ucasulwa ngama-microorganisms ahlala kulwelwesi lwe-mucous lwepharynx nephephabhuku lokuphefumula elingaphezulu. Uma ukutholwa kuqondile futhi kungukuqala ukwelashwa kuqalile, izinkomba ezinzima zesifo zivame ukunyamalala ngemuva kwezinsuku ezimbalwa. Ukwelashwa kuvame ukubekwa ekhaya (esibhedlela kuphela ezimeni ezibucayi kakhulu).
Ama-antibiotic ama-angina anqunyelwa isibalo esikhulu sezenzo - i-bactrim, augmentin, i-erythromycin, i-streptocide Ukwelashwa okusebenzayo, le mishanguzo kufanele ithathwe okungenani izinsuku ezingama-7, ngaphandle kwalokho ukutheleleka kuhlala kumzimba usesimweni "sokulala" futhi kungadala izinkinga ezinkulu. Ekwelapheni i-tonsillitis, ukwelashwa kwendawo kungasetjenziselwa ukwehlisa umphimbo obuhlungu - ukuvuvukala, ukunisela ngama-aerosols akhethekile, amaphilisi atholakalayo, njll. Nge-catarrhal pain pain, ama-lymph node angakhuphuka, imvamisa ukwelashwa akudingeki, ngakho-ke lapho ukutheleleka emzimbeni kubhujiswa, ama-lymph node abuyele kokujwayelekile ngokwawo .
Umphimbo obuhlungu besifo segciwane
Imithi elwa namagciwane ngomphimbo obuhlungu obubangelwa amagciwane ayisebenzi.Ukudluliselwa kwaleli gciwane kwenzeka ngamaconsi omoya - ngokunyenya, ukukhwehlela, ngezinto zomuntu siqu - ngocingo, isikhafu, izitsha, amathoyizi, njll. Ukwelashwa kwe-angina kuleli cala kuqukethe ekunciphiseni izimpawu zesifo - izinga lokushisa, umphimbo obuhlungu, ubuthakathaka. Imithi elwa nama-antipyretic, izidakamizwa zokubuyisa imvamisa imiselwe. Ukwehlisa ukubekeka kanye nomphimbo obuhlungu, i-rinsing nge-decoctions yamakhambi (i-chamomile, i-sage, i-eucalyptus), amaphilisi atholakalayo akhethekile (i-pharyngosept, neoangin, njll.) Asiza kahle.
Angina ngaphandle komkhuhlane
Izimpawu ezejwayelekile zomphimbo obuhlungu zithathwa njengekhanda elibuhlungu kanye nomkhuhlane ophakeme (kuze kube ngama-40 degrees). Kodwa kunezimo lapho i-angina iqhubeka ngaphandle kokunyuka kokushisa komzimba. Imvamisa lokhu kwenzeka nge-catarrhal tonillitis, lapho kuphela ithanga lamathanga lingathinteki khona.
Kepha ukuntuleka kokushisa akusho ukuthi izinyathelo akufanele zithathwe ukulwa nalesi sifo. Kuyadingeka, njengakwezinye izindlela ze-angina, ukubona ukuphumula kombhede, i-garrag ukwenza lula ukugwinya (isixazululo sikasawoti kanye nesoda yokubhaka, ama-decoctions amakhambi afanelekile). Ukuphuza uketshezi oluningi kunconyelwa ukuvikela ukomisa futhi ususe umkhiqizo wokubola wamagciwane.
Ama-antibiotic ama-angina, noma kungekho thembo lokushisa, anqunywa isibalo esikhulu sokwenza, ikakhulukazi iqembu le-penicillin (amoxicillin, ampicillin).
ISrerecccal angina itholakala ikakhulu ebuntwaneni. Ukutheleleka kwe-Streptococcal akuwathinti ama-tonsils, kepha ngalesi sifo kunomkhuhlane ophakeme, ubuthakathaka, nokuvuvukala kwama-lymph node. Umenzeli obangela lesi sifo, njengoba negama lisho, amagciwane ama-streptococcal. Lesi sifo singathatheliswa kusuka kumphathi wesifo (okungenzeka singazi nokuthi) noma kumuntu ogulayo ngamaconsi omoya. Kusukela esikhathini sokutheleleka kuze kufike ekuqaleni kwezimpawu, kuvame ukudlula izinsuku eziningana, lesi sifo siqhubeka ngendlela emnene futhi sifana nezifo zokuphefumula ezinamandla.
Ama-ejenti we-antibacterial asebenzayo ngokumelene ne-streptococci anqunyelwe: i-cephalexin, i-amoxicillin, i-cefuroxime, i-cefprosil, njll. Ngokuphendula komzimba, i-erythromycin inqunyelwe. Isikhathi sokwelashwa kufanele siqashelwe ngokuqinile, ukwelashwa akufanele kuphazanyiswe ngokuzimeleyo, noma ngabe sekunyamalala kwazo zonke izimpawu.
Ukunquma ama-antibiotic kuhlose ukunciphisa izinkinga ezingaba khona ze-angina.
I-Augmentin noma i-Amoxiclav?
I-Sumamed noma i-Amoxiclav - osebenza kangcono?
Yini engathatha isikhundla somuthi i-Azithromycin? Analogs, intengo, izinzuzo kanye nokubi.
Izinzuzo ze-azithromycin ngokuqhathaniswa nezimpawu zayo zimi ngalendlela elandelayo:
Izici ezahlukahlukene, njengezindleko zokuthola izidakamizwa, isidingo sokubonisana odokotela abaningi, ukuqonda kokuxilongwa kwezivivinyo, kanye nephesenti lokwehluleka kokwelashwa noma ukusabela komzimba, kungenza ezinye izinketho ezinenzuzo kakhulu nezingabizi kakhulu eziphakanyisiwe.
Izinzuzo kanye nokubi kwamamoya ahlukahlukene wokuxilonga ukuze aqashelwe. streptococcal pharyngitis. Izinjongo zokwelashwa ukunciphisa izimpawu futhi ugweme izinkinga ze-purulent kanye ezingezona ezimsulwa. Iziguli ezine-acute streptococcal pharyngotonisillitis, noma ngaphandle kokwelashwa, zivame ukuxazulula inkinga yazo, futhi ngamaphesenti amancane kuphela eziguli ezinemicimbi engalashwa ezothuthukisa isithombe somkhuhlane we-rheumatic noma ezinye izinkinga. Ukwelashwa ngama-antibacterial agents kuhloselwe kakhulu ukuvikela ukuthuthukiswa komkhuhlane we-rheumatic, izinkinga ezihambisana nesifo senhliziyo kanye nokubonakala kwezinye izinkinga.
kunani eliphansi le-antibiotic, ngakho-ke kushibhile ukusebenzisa i-analog yeSumamed - Azithromycin, intengo yayo eqala kusuka kuma-ruble ayi-125 , impilo ende yesidakamizwa uma iqhathaniswa nezinye izikhala ze-azithromycin, imiphumela emibi ingekho ngaphezulu kwamaphesenti ama-2 amacala.
Phakathi kwamaphutha angabonakala:
i-bioavailability ye-azithromycin incane kancane kunaleyo enezimpawu eziningi, azikho izinhlobo zokukhishwa kwemijovo kanye nezingane.
Yini isidakamizwa esihle iSumamed (analog Azithromycin)? Ukwakheka kanye ekhemisi.
Ukuqanjwa kweSumamed kuqukethe into esebenzayo ekhemisi i-Azithromycin, kanye nezingxenye ezisizayo ezivumela ukukhululwa kwento kanye nokumuncwa kwayo. Isenzo se-antibacterial sesakhi esisebenzayo asisekelwe ekubhujisweni, kepha ukucindezelwa kokukhula kwamagciwane, ukuzala kwabo. Lokhu kutholakala ngokuvimbela ukuhlanganiswa kwamaprotheni afakwe ekwakhekeni kweseli encane kakhulu. Isidakamizwa iSumamed ekugxileni okuphezulu futhi sinomphumela we-bactericidal, okusho ukuthi sichitha "izivakashi ezingamenywanga". Ulwa ne-streptococci, chlamydia, staphylococci kanye ne-mycoplasma.
Ukukhetha indlela engcono kakhulu yokubulala amagciwane phakathi kobubanzi obuhlukahlukene bokuhlanganiswa okutholakalayo kudinga ukuqhathaniswa nokusebenza ngokwengqondo nangokwebhaktheriya, imiphumela emibi ehambisana nakho nezindleko zazo ezihlobene. Ezinye izindlela zokwelapha ezikhona zifaka ukusetshenziswa kwe-penicillin yedepho, ama-antimicrobials omlomo kuhlobo lwendabuko noma kuma-regimens afushane.
I-bronchitis e-acute: ingabe ama-antibiotic ayadingeka ekulimazeni i-bronchi ezinganeni?
Idiphozithi yokwelashwa kwepenicillin.Kodwa-ke, ubufakazi obuhlukahlukene buyasekela futhi buyasekela ukusetshenziswa kwabo ekuvinjelweni okuyinhloko komkhuhlane we-rheumatic fever, phakathi kwabo okukhonjiswe ukuthi buwusizo ekuvinjelweni kwesibili kanye nokusebenza kwawo ngokulawula ukuqubuka kwesifo.
Uthole i-typo? Khetha lesi siqeshana bese uthumela ngokucindezela uCtrl + Enter.
Sawubona Igama lami ngingu-Ana, ngineminyaka engama-29. Ngokuvamile, ngine-sinusitis, ngaso sonke isikhathi lapho ngifuna izeluleko nokuhlangana nodokotela. Imvamisa ngangibekelwe iSumamed, kepha i-Amoxiclav ibekelwe okokugcina. Ake ungitshele, yini engcono nge-sinusitis: ISumamed noma i-Amoxiclav?
Emsebenzini okhonjiwe, impendulo yokwelashwa ebonakalayo yashesha ngerejimendi ehlanganisiwe. Ukuphathwa kwe-streptococcal pharyngitis ngamarejimeni omlomo wendabuko. Safunda amakhompiyutha ahlukahlukene ekwelashweni kwe-streptococcal pharyngotonisillitis, sahlukanisa ama-cephalosporins nama-macrolide ahlukahlukene phakathi kwawo. Iningi lalawa antimicrobials aqhathaniswa nezinga legolide ekwelashweni okulethwe yi-phenoxymethylpenicillin elawulwa ngaphezu kwezinsuku eziyi-10, futhi izifundo zenziwe ngokuyinhloko ezigulini zezingane.
Amakhemikhali wokuhlola afakiwe, phakathi kwabanye, i-cefadroxil, i-cefaclor, i-cefprozil kanye ne-cefixime. Ucwaningo luye lwaqhathanisa ama-cephalosporin ahlukile komunye nomunye ngaphandle kokukhombisa umehluko ekusebenzeni kwawo ngokomtholampilo, yize abanye ababhali bebika amanani aphezulu wokuqothula ngamakhompiyutha athile.
Sawubona Anna! Kunzima ukusho ngokungangabazeki ukuthi kungcono, iSumamed noma i-Amoxiclav ekwelapheni i-sinusitis, ngoba ngamunye wale mishanguzo inezinzuzo nezithelo zayo. Ngaphezu kwalokho, izici zomzimba ngamunye zithathwa lapha.
Isibonelo, iSumamed iyinhlangano elwa namagciwane esizukulwane esisha, inemiphumela eminingi ebangelwa amagciwane angama-pathogenic ezinhlobo ezahlukahlukene, kufaka phakathi lezo ezikhipha i-sinusitis, futhi engokwesigaba sama-macrolides. Iyangenwa kalula, ayibangeli cishe noma iyiphi imiphumela emibi, futhi ayithathi ngaphezu kwezinsuku ezingama-5 ukuyithatha. Kodwa-ke, futhi unezithiyo zayo, okokuqala, lokhu kungukuphikisana. Ukwemukelwa kwalesi sidakamizwa kunemikhawulo yeminyaka yaso, kubuye kuphikiswe ekukhulelweni kanye ne-pathologies enzima yesibindi.
Kwezinye lezi zifundo, imiphumela emibi ibiphezulu kakhulu ezigulini ezithola ama-macrolides. Amakhompiyutha ahlaziywa ngohlobo lwama-classical wezinsuku eziyi-10 ahambelana ne -cacithromycin, i-dirithromycin ne-roxithromycin. Izifundo ezine-clindamycin emithini ehlukene zithole imiphumela emihle yomtholampilo kanye ne-microbiological.
Inzuzo ebonakalayo ingahlotshaniswa nokumelana nalolu hlobo lwama-β-lactamases, anama-cephalosporins wesizukulwane sesibili nesesithathu. Le ndlela igqugquzela ukubambelela kuloluhlobo lokwelashwa futhi kungenzeka inciphise imiphumela emibi nezindleko. Ngokuvamile, lezi zifundo ziveze imiphumela efanayo ngokuya kokusebenza kahle kwemitholampilo, ukuqothulwa kwamagciwane kanye namaphesenti okubuyela emuva kunalawo abonwa ngokwelashwa okuvamile kwezinsuku eziyi-10. Ezigulini ezingane, ama-regimens ane-erythromycin izinsuku ezingama-5, i-amoxicillin yezinsuku eziyi-6, i-cefuroximaxetil, ne-cephalosporins yesizukulwane sesithathu.
Ngokuqondene ne-Amoxiclav, lesi sidakamizwa sihlobene nemithi elwa namagciwane enhlobonhlobo yezenzo, eqenjini le-penisilini elenziwa ngemisipha. I-Amoxiclav inomphumela odabukisayo ezindongeni zamagciwane, ngenxa yalokho bafa ngokushesha. Imvamisa, lo muthi ubekelwe i-sinusitis, i-otitis media, i-cystitis, i-bronchitis. Umthamo we-Amoxiclav kubantu abadala uvame kaningi kabili ngosuku.
Ngaphandle kokusebenza okulingene kokulingene kokulingeneko, izifundo nge-azithromycin regimens yezinsuku ezi-3 bezihlotshaniswa nezinga eliphakeme lokuphinda libuyele kulezi ziguli, eziphazamisa izincomo zazo. Amarejista amafushane afundelwe nasezigulini zabantu abadala. Ama-cephalosporins afundwayo afaka phakathi amakhompiyutha alawulwa ngaphezu kwezinsuku ezi-5. Ukwelapha okufushaniswe ne-amoxicillin kwakusetshenziswa okungenani izinsuku eziyi-6 nasemithanjeni ephezulu.Uvivinyo nge-azithromycin 3 lubonise ukusebenza ngempumelelo okufanayo kokulashwa kwezinsuku eziyi-10 kusetshenziswa ezinye izinto ezihlanganisiwe, kodwa akwaziwa ukuthi lezi ziguli zisengozini enkulu yokuphindelela, njengoba kubonwa ezigulini ezingane.
Uma sikhuluma ngobubi bomuthi onjalo, okokuqala-ke kufanelekile ukugqamisa ama-contraindication kanye nemiphumela emibi, phakathi kwawo kukhona ukungafani komzimba ngesimo sokuqubuka kwesikhumba, i-dysbiosis, ukwehluleka.
Njengoba ubona, zombili lezi zindlela zokwelapha ezingenhla zinhle kakhulu ekwelapheni ukugula okunjalo, ngakho-ke, nginquma ukuthi yini okufanele ngiyithathe kangcono, iSumamed noma i-Amoxiclav ye-sinusitis, ngincomela nodokotela wakho. Into eyodwa eqinisekile, noma imuphi umuthi ongenhla uzokusiza ngokushesha futhi ngempumelelo ukunqoba lokhu kugula.
Izinguquko ekuqeshweni kwe-erythromycin kusuka emijolweni emi-4 kuya kwengama-2 yahambisana namaphesenti afanayo emiphumela emibi. Ukuqapha kwe-Microbiological ngemuva kokwelashwa. Kufanele icelwe kuphela ngaphansi kwemibandela ethile ekhethekile, futhi ifaka. Iziguli ezinomlando womkhuhlane we-rheumatic fever kanye nesiko elihle le-pharyngeal emva kokwelashwa kufanele zithole ukwelashwa okusha, noma ngabe zingenazimpawu.
Ukuphathwa kwe-pharyngitis ephindaphindayo nokuhluleka kwezokwelapha. Ukwelashwa kweClindamycin kungenzeka kwenziwe ngaphambi kokuhlinzwa. Ukudluliswa kwesifuba kwaleli ejenti kuvamile koxhumana nabo emndenini, ikakhulukazi ezinganeni, yize imvamisa yokuhlasela kwesibili kwezifo ezingahlaseli ingejwayelekile. Njengoba othintana nabo bengaphansi kokukhula kwesifo esinezifo eziphezulu zokushona noma i-torpid noma ukuziphendukela kwemvelo okugcwele, abanye ochwepheshe babona kunesidingo sokutadisha nokuphatha othintana nabo ngamacala anzima futhi angahlaseli.
Uyini umehluko, yikuphi okungcono?
Umehluko kule mishanguzo kubhekwa ukuthi uhlobene namaqembu ahlukene. I-Sumamed yi-macrolide antibiotic, i-Amoxiclav ingeyochungechunge lwe-penicillin. Ngokuya kwalokhu, izakhi ezisebenzayo zale mithi ziyizinto ezahlukahlukene. Yomibili le mikhiqizo iyatholakala ngesimo sethebulethi, ngesimo samakhompiyutha nokumiswa.I-Amoxiclav iyatholakala ngesimo samathebulethi ahlakazeka ancibilika ngokushesha.